April 2013 | ကမ်းလက်
- on 4/30/2013 - No comments
ရယ်သံ ငိုသံတွေ နားမထောင်ဖြစ်တာကြာပြီ
ရှစ်ပါး မတိုး မလျော့ပဲ မဟုတ်လား။
ဟင် ဒါဆို ဘာထူးလို့လဲ???
ကွန်နက်ရှင်း မကောင်းသေးသော နားလည်မှုများ
ဒေါင်းလုပ်ဒ် လုပ်တိုင်း ပြုတ်ကျတတ်သော အနာဂတ်စာမျက်နှာများ
အစိမ်ရောင်အဝိုင်းလေးလို ဝိုင်း၍မပြီးသော မနေ့က မနက်ဖန်များ
အသံကြည်ကြည်နားဆင်ဖို့ မြေညီညီမှာ မနေနိုင်သော လက်ကိုင်ဖုန်းများ။
ဒါက ဘုရားလက်ထက်မှ မဟုတ်တာ။
( ဘုရားက အချော့ကောင်း တရားပြကောင်း )
ဖုန်လုံးများအတွက် အာမခံကုမ္ပဏီဖွင့်သော လက်ကိုင်ပုဝါများ
အမိန့်ပေးနေသော ကျွန်းစာပွဲ အကောင်းစားကြီးများ။
ဒီကောင်က တကယ် လွမ်းကောလွမ်းတတ်လို့လား???
ဒီမှာ ကိုယ့်လူ ဒီခေတ်ကြီးထဲမှာ
ချွေချွေတာတာ မျှ လွမ်းနေရတာ မင်း သိပုံမရဘူး
ကြိုးနဲ့ ခါးသိမ်အောင် ချည်ထားမှ ညီညွတ်ရမှာလား???
ဘယ်သူက ဒူးနဲ့တိုက် ချိုးပြနေမှာလဲ
မင်း နာရီ မြန်နေလို့ လို့ မှတ်ယူပေးပါ
ခံစားမှု ခရိုက်စစ်ဖြစ်နေသော မိသားစု ဥရောပများ
ဘောကန်ဖိနပ် မရှိတဲ့ နာရီပေါ်က မျက်ရည်တန်များ။ ။
ရှင်းသန့်စိမ်းလဲ့ကျွန်း (၉း၎)
in Hard Truths By Lee Kuan Yew, ဇင်ဝေသော် - on 4/29/2013 - No comments
မေတ္တာရပ်ခံချက်။ ။ ဒီရက်တွေမှာ အလုပ်ပိနေတာရယ်၊ ယာယီခရီးစဉ်တွေ ရှိနေတာရယ်ကြောင့် ပို့စ်တွေ အရင်လို ပုံမှန်တက်နိုင်မယ် မဟုတ်ကြောင်း ကြိုတင်အသိပေးထားချင်ပါတယ်။ လီကွမ်းယု စာမူတွေတော့ တစ်ပတ် နှစ် ပုဒ် တက်ပါမယ်။ ရေးထားသမျှတွေထဲက အက်ဒမင် သဘောကျတာလေးေ တွ (ကိုယ်တိုင် စိတ်တိုင်းမကျလို့ ဆွဲထားတာတွေ) တက်လာနိုင်ပြီး အဟောင်း တချို့လည်း ဖေ့ဘုတ်မှာ မဖတ်ရသေးသူတွေအတွက် ပြန် တင်ပေးဖို့ အစီအစဉ်ရှိနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်း လေးစားစွာ အသိပေး အပ်ပါတယ်။
မေး ။ ။ စင်္ကာပူအတွက် နျူးကလီးယားစွမ်းအင်ကရော ဘယ်လို နေမ လဲ။ ဖြစ်နိုင်ခြေရော ရှိရဲ့လား။
ဖြေ ။ ။ ယူနစ်သေးသေး နျူးကလီးယားဖိုကတော့ အန္တရာယ်လည်း ကင်းပြီး ဖြစ်လည်း ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ သူတို့ သတင်းပို့ထားတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘယ် နျူးကလီးယားမှ အန္တရာယ်ကင်းတယ်လို့တော့ မရှိပါဘူး။ ဓာတ်ပေါင်း ဖိုကို ရေပေါ် ပေါ်နေနိုင်တဲ့ ရေငုပ်သင်္ဘောလိုဟာပေါ်မှာ တင်ထားမယ်ပေါ့။ ပထမ အသေးဆုံး ယူနစ်ကနေ စမယ်။ အဲ့ဒါ အလုပ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင် အလတ် စား ယူနစ်ကို စမ်းသပ်ကြမယ်။ ပြီးတော့မှ အလက်စား ယူနစ်ဘေးမှာ အေ သးစားလေးတွေ ထပ်ဖြည့်ထားဖို့ ကြိုးစားကြမယ်ပေါ့ကွာ။
တို့ ကြုံရမယ့် ပြဿနာက စက်ရုံအလုပ်ရုံတွေက စွမ်းအင်မသုံးတဲ့ ည ပိုင်းတွေမှာ စွမ်းအင်တွေက ပိုနေမယ်။ အဲ့ဒီစွမ်းအင်တွေကို ဘယ်လို ထိန်း သိမ်းကြမလဲဆိုတာပဲ။ ရေအားလျက်စစ်ပါ ရှိမယ်ဆိုရင်တော့ ရေပမ့်(ပ် ) တွေ နဲ့ ရေပြန်ပို့ပေးပြီး စွမ်းအင်ပိုကောင်းအောင် လုပ်ယူလို့ ရတာပေါ့။
ယူဂိုစလားဘီးယားမှာ ဒါမျိုး လုပ်ထားတာ တွေ့ခဲ့ရဖူးတယ်။ စွမ်းအင် အသုံး နည်းတဲ့ ညပိုင်းတွေမှာ ဆိုရင် သူတို့ နျူးကလီးယား ဓာတ်ပေါင်းဖိုတွေ ကို ရေတွေနဲ့ ဖြန်းပေးကြတယ်။ ဖြန်းလိုက်တဲ့ ရေတွေက ရေကန်ကြီးထဲ ပြန်ရောက်သွားတယ်။ ဒီလောက်အထိ လုပ်နိုင်ဖို့ကလည်း တို့မှာ စွမ်းအင်က အ လုံအလောက် မရှိဘူး။
မေး ။ ။ ဒီလို အခြေအနေတွေ ကြားထဲကနေပြီး စင်္ကာပူကို သဘာဝ ပတ် ဝန်းကျင်အားဖြင့်လည်း နေချင်စဖွယ်၊ စီးပွားရေးအားဖြင့်လည်း ကမ္ဘာ့မြို့ေ တ်ာပုံစံဖြစ်အောင် တည်ဆောက်ထားနိုင်ခဲ့တဲ့ အပေါ်မှာ ကျေနပ်မှုရော ရှိပါ သလား။
ဖြေ ။ ။ ငါ့သဘောအရကတော့ ပြွတ်သိပ်နေမှာစိုးလို့ လူဦးရေ သိပ်များ မှာကို မလိုလားဘူး။ ငါတို့ ဘယ်လောက်ပဲ လုပ်နိုင်လုပ်နိုင်၊ ဆိုပါတော့ … သ ဘာဝဥယာဉ်တွေ လုပ်တာ၊ စိမ်းလန်းတဲ့ မြေကွပ်လပ်တွေကို ထိန်းသိမ်းပေး တာ စတာတွေပေါ့။ လူဦးရေကသာ စီးပွားရေးအတွက် ကြည့်ပြီး ခေါ်ထားရ တဲ့ အလုပ်သမားတွေ အပါအဝင် ခြောက်သန်းခွဲလောက်သာ ရှိမယ်ဆိုရင် မွန်းကြပ်ပြီး မသက်မသာ ဖြစ်လာမှာပဲ။
ငါ ဟောင်ကောင်ကို ရောက်တော့ လေထုညစ်ညမ်းမှု မရှိဘူးဆိုရင်တောင် လူတွေ များလွန်းလို့ ငါ သဘောမတွေ့ခဲ့ဘူး။ ရှန်းဟိုင်းမြို့ဟောင်းလည်း အတူတူပဲ။ ၁၉၇၆ - ခုတုန်းက အကောင်းဆုံး ဧည့်ရိပ်သာမှာ တည်းတာေ တာင် အောက်ဆင်းပြီး လမ်းလျှောက်လိုက်ရင် လူတွေက ပြွတ်ခဲနေတာပဲ။ မင်းသွားရင် သွားနေ၊ မသွားရင် သူတို့က နောက်ကနေ တွန်းသွားတာ။ ပြီးတော့ မှောင်မည်းမည်းနဲ့၊ ဆိုင်တွေကလည်း အမှောင်ထဲ၊ လမ်းမီးတွေ က လည်း မလင်းတလင်းနဲ့။
ဟောင်ကောင်မှာ သူတို့အိမ်လေးတွေက ကျဉ်းလွန်းတော့ သူတို့အပန်းဖြေဖို့ ဆိုရင် အပြင်မှာ အပန်းဖြေကြရတယ်။ ဖျော်ဖြေရေးတွေကလည်း အပြင်မှာ ပဲ။ စင်္ကာပူမှာ ငါတို့ လူမျိုးတွေက တီဗွီ အကြီးစားကြီးတွေ၊ နောက်ဆုံးပေါ် စက်ပစ္စည်းတွေနဲ့ ကျကျနန နေကြရတယ်။ အပြင်မှာ သိပ် မတွေ့ရဘူး။ ညဉ့်နက်တဲ့အထိ အပြင်မှာ တွေ့ရတာက နိုင်ငံခြားသား ဧည့်သည်တွေပဲ များတယ်။
ငါ့သဘောအရကတော့ လူဦးရေ လျှော့ချမယ်။ ဒါပေမယ့် ငါက ဆုံးဖြတ်ချက် ချသူ မဟုတ်တော့ဘူး။ စင်္ကာပူ လက်ရှိအစိုးရကပဲ စင်္ကာပူအတွက် ဘာလုပ် သင့်သလဲဆိုတာ သူတို့ဘာသာ ဆုံးဖြတ်ပြီး လုပ်ကြလိမ့်မယ်။
မေး ။ ။ ကမ္ဘာမြေ ပူနွေးလာမှုဖက်ကို လှည့်ကြည့်ကြပါဦးစို့လား။ ကမ္ဘာ့ရာသီဥတုကို ထိန်းသိမ်းဖို့ ကမ္ဘာမှာ ဝမ်းစာမရှိဘူးလို့ (အူမတောင့်မှ သီလစောင့်လို့) ပြောခဲ့တယ်။ ကမ္ဘာ့အနာဂတ်အတွက် မကောင်းနိုင်တဲ့ အလားအလာမျိုးတွေ မြင်မိသလား။
ဖြေ ။ ။ ဟုတ်တယ်။ ငါ ပြောခဲ့ပြီးပြီပဲ။ လုပ်နိုင်တဲ့အပိုင်းကိုပဲ လုပ်ပြီး မလုပ်နိုင်တဲ့အပိုင်းကို လုပ်လို့ မရဘူးလေ။ ပြောင်းလဲလာတဲ့ ရာသီဥတုနဲ့ ညီမျှအောင် ဘယ်လိုနေသွားကြမလဲဆိုတာ အပူရှိန် ဘယ်လောက် ပိုပြင်းပြလာတယ်ဆိုတာ အပေါ်မှာ မူတည်တယ်။
မေး ။ ။ တစ်ကမ္ဘာလုံးရဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေကို ပြောင်းလဲပေးဖို့ ကြိုးစားပြီး ဒီပြဿနာကို မဖြစ်မနေ ဖြေရှင်းသင့်တယ်လို့ မထင်ဘူးလား။
ဖြေ ။ ။ တရုတ်နဲ့ အိန္ဒိယက မြစ်ကမ်းဘေးမှာ နေကြတဲ့ သန်းပေါင်း များ စွာသော လူတွေ၊ အဲ့ဒီမြို့တွေမှာ ရှိကြတဲ့ ကုန်သည်ပွဲစား အသေးလေးေ တွ ရေပြတ်လတ်မှုဒုက္ခ ကြုံလာရပြီဆိုရင်တော့ အကြီးအကျယ် ပြဿနာ တက်လာမှာပဲ။ ဒီလောက်များတဲ့ လူတွေအတွက် ရေအလုံအလောက် ရဖို့ ဘယ်ကို သွားကြ၊ ပို့ထားကြမလဲ။ သူတို့ကိုယ် သူတို့ရော ဝမ်းဝအောင် ဘယ်လို ရှာစားကြမလဲ။ သူတို့ကတော့ အသက်ရှင်လို့ ရတဲ့နေရာတွေကို သွားကြမှာပဲ။ အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ ပြဿနာက ကမ္ဘာနဲ့ ချီသွားလိမ့်မယ်။ (အဲ့သလိုမျိုး ဖြစ်လာရင်တော့ တရုတ်နဲ့ အိန္ဒိယ အစိုးရက ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးကို ပိုပြီး ဂရုစိုက်လာစရာ ရှိတယ်။)
မေး ။ ။ ဒါဆိုရင်တော့ ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်တွေအားလုံး လက်တွေ့ကျတဲ့ သဘောတူညီမှုတစ်ခုတော့ ရအောင် ရှင်သင့်ကြပြီပေါ့။ ဖြစ်နိုင်မယ်လို့ မစ္စတာလီ ထင်ပါသလား။
ဖြေ ။ ။ မထင်မိဘူး။ ကိုပင်ဟေဂင် (Copenhagen) အစည်းအဝေးကို ကြည့်လေ။ (၂၀၀၉ - ခုနှစ်က ကုလသမဂ္ဂက ကမ္ဘာ့ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်း သိမ်းရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ စည်းဝေးခဲ့တဲ့ အစည်းအဝေးကို ရည်ညွှန်းတာပါ။) တရုတ်က ပြောတယ်။ ခင်ဗျားတို့က ကျွန်တော်တို့ကို ကာဗွန်ဒိုင်အောက် ဆိုက် လျော့ချဖို့ ပြောတယ်။ စိမ်းလန်းစိုပြေရေး နည်းပညာကိုလည်း အလ ကားပေးမယ်လို့ ပြောတယ်။ ခင်ဗျားတို့လည်း (အမေရိကန်တွေ) ၁၉၉၀ က ကာဗွန်သုံးစွဲမှုထက် (၄၀) ရာခိုင်နှုန်း လျှော့ချဖို့ လုပ်လေ တဲ့။
ဒီတော့ ကွန်ဂရက်က ဘီး(လ်)ကလင်တန်ကို (၄) ရာခိုင်နှုန်း လျှော့ချရင် ရပြီလို့ ခွင့်ပြုလိုက်ကြတယ် လေ။
မေး ။ ။ ဒီပြဿနာအတွက် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ခေါင်းဆောင်မှု မရှိလို့များ လား။
ဖြေ ။ ။ ခေါင်ဆောင်မှု မရှိလို့ မဟုတ်ဘူး။ နိုင်ငံကြီး၊ နိုင်ငံသေး ဘယ်လို ခေါင်းဆောင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်
“ကောင်းပြီ၊ ကမ္ဘာကြီး ပူနွေးလာတာကို ကာကွယ်တဲ့ အနေနဲ့ စီးပွားရေး တိုးတက်တာ၊ မတိုးတက်တွေကို ဂရုစိုက် မနေတော့ဘူး။ ကမ္ဘာကြီးကို ကယ်တင်တော့မယ်။ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ရှုံးရင်လည်း ရှုံးပါစေ” လို့ သူတို့ က ပြောပါ့မလား။ စင်္ကာပူအစိုးရကတော့ ဒါမျိုး လုပ်နိုင်မယ် မထင်ဘူး ။ ခေါင်းဆောင်တိုင်းဟာ သူ့နိုင်ငံရဲ့ ပြဿနာကိုပဲ အဓိကထား ကြည့်နေရ တာပါကွာ။
မေး ။ ။ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ ရာသီဥတုပြောင်းလဲရေး အခြေခံမူဝါဒအတိုင်း စင်္ကာပူဟာ Annex တစ်နိုင်ငံ မဖြစ်နိုင်ဘူးလား (စက်မှုနိုင်ငံ ဖြစ်သော်လည်း သူ့နားလည်မှုနဲ့အတူ အိုဇုန်းလွှာပေါက်ပြဲမှု အတွက် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးတာဝန်ကို ယူထားတဲ့နိုင်ငံ)။ အဲ့သလိုဆို စင်္ကာပူအပေါ်မှာ အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေက ဘယ်လို ရှိလာမလဲ။
ဖြေ ။ ။ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဒါကို မလိုက်နာနိုင်ဘူးလို့ ငါတို့က ပြန်ပြောမှာပါ။ ဒီဓာတ်ငွေ့ ယိုစိမ့်မှုတွေက ငါတို့သုံးတဲ့ ပစ္စည်းတွေ ထုတ်လုပ်လို့မှ မဟုတ် တာ။ ကမ္ဘာက သုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေ၊ အပြည်အပြည်ဆိုင်ရာ လေယာဉ်တွေ သုံး စွဲတဲ ဓာတ်ငွေ့တွေကြောင့် ယိုစိမ့်တာလို့ ပြောမှာပေါ့။
ငါတို့က စီးပွားရေးဌာနချုပ်လို ဖြစ်နေတာ။ တစ်ကမ္ဘာလုံးက သင်္ဘောတွေ ၊ လေယာဉ်တွေ ဆီဖြည့်တဲ့ နေရာပဲ။ ဒါကို တို့က ဘယ်လိုလုပ် သူတို့ပြော တာကို လိုက်နာနေလို့ ရမှာလဲ။
ငါတို့က ပစ္စည်းတွေကို ပို့တာ။ တို့ထုတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေက တို့ သုံးစွဲဖို့ချည်းပဲမှ မဟုတ်တာပဲ။ သင်္ဘောတွေ၊ လေယာဉ်တွေ ဆီဖြည့်ရာ ဌာနချုပ်ဆိုတဲ့ ဂုဏ် ကို ဘာအတွက် ဖျက်ဆီးပစ်ရမှာလဲ။ ဒါဆိုရင် စင်္ကာပူရဲ့ အဓိပ္ပါယ်က ဘာလဲ။
တို့က ဆက်ပြောမယ်။ “ကြည့်။ ဒီ စွမ်းအင်တွေရဲ့ နောက်ဆုံး ထုတ်ကုန်ကို သုံးစွဲသူတွေက ဘယ်သူတွေလဲ။ ဒီအတိုင်းလည်း ရပ်တည်၊ ကာဘွန် ဒိုင် လည်း လျှော့ဆိုရင် ဘယ်လို ဖြစ်နိုင်မလဲ။ ခင်ဗျားတို့က ကျွန်တော်တို့ ကို သေဖို့ အကြံတွေ ပေးနေတယ်။ ဒါဖြင့် လူဦးရေ ငါးသန်းရဲ့ တာဝန်ကို ခင်ဗျားတို့ ယူထားနိုင်မလား” လို့။
မေး ။ ။ ပြည်ပပို့ကုန်အတွက် သုံးစွဲတဲ့ စွမ်းအင်ပမာဏနဲ့ ပြည်တွင်းသုံး ပစ္စည်းတွေအတွက် သုံးစွဲတဲ့ စွမ်းအင်ပမာဏ ခွဲခြားထားရင်တော့ ရမယ်။
ဖြေ ။ ။ ဟုတ်တယ်။ ဒါမျိုး လုပ်ရမယ်။
လင်ကွန်းရဲ့ ဘရိတ်ဖတ် မှတ်စု
in စာတိုပေစ, ဇင်ဝေသော် - on 4/28/2013 - No comments
လူတချို့ကို အချိန်ပြည့် အရူးလုပ်လို့ ရကောင်း ရမယ်၊
လူအားလုံးကိုလည်း အချိန် အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ အရူးလုပ်ထားလို့ရနိုင်မယ်၊
ဒါပေမဲ့ အားလုံးကို အချိန်ပြည့် အရူးလုပ်ထားဖို့ဆိုတာကတော့ လုံးဝ မဖြစ်နိုင်ဘူး။
( Abraham Lincoln၊ အေဘရာဟင် လင်ကွန်း)
ဦးအောင်မင်းတို့လာမယ့် စင်္ကာပူက ဆွေးနွေးပွဲ (သို့) နေကျော်တဲ့ လောကဓံအတွက် ပဲကြီးလှော် တစ်စေ့
in ဇင်ဝေသော်, အမျိုးသားရေး - on 4/27/2013 - No comments
မေလ တစ်ရက်နေ့မှာ လုပ်ကြမယ့် ဒီ အတွေ့အကြုံဖလယ်ပွဲကတော့ လခ စားတွေက စပွန်ဆာခံဖိတ်တဲ့ ဝန်ကြီးတို့ ပြောဟောပွဲဆိုရင် ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းေ ကျာ် မှန်ပါလိမ့်မယ်။ အဲသလိုပဲ သူတို့ပြောချင်နေတဲ့ ရင်တွင်းက စေတနာကို တစ်ဦးချင်းစီ ခပ်ပါးပါးလည်း သွန်ချထားခဲ့ကြလိမ့်မယ်။ ပန်လိုက ပန်၊ ဒါ ဂန္ထ ဝင်မြောက် နှင်းဆီတစ်ပွင့်။
ဘာအတွက်လုပ်တယ်၊ ဘယ်သူတွေ လာမယ်၊ ဘာတွေကို ဘယ်သူတွေဆွေးနွေးကြမယ်စတဲ့ ဖော်မယ်သတင်းတွေကတော့ ဂျာနယ်နဲ့ အွန်လိုင်း မီဒီ ယာမှာ အခန့်သား ရှိနေပါပြီ။ ပိုပြီးအသေးစိပ်သိလိုသူတွေ အတွက် အေးငြိမ်း ဘလော့ဂ်ကို အလည်အပတ်သွားနိုင်ကြောင်း ကြမ်းခင်းပေးလိုက်ပါရစေ။
ကျနော်ပြောချင်တာက ဒီပွဲကို မရ ရအောင် စီစဉ်သူတွေရဲ့ အခက်အခဲတချို့ နဲ့ ချစ်စရာ စိတ်ဓာတ်ပါ။ သဘောမတူရင် ခွင့်လွှတ်ပါ။ ကျနော်ကဒါကို နေကျော်တဲ့ လောကဓံအတွက် ပဲကြီးလှော် တစ်စေ့လို့ ခံစား နာမည်ပေးလိုက်မိတယ်။
တကယ်က ဒီပွဲဟာ ဒီဇင်ဘာမှာ စခဲ့ဖို့ တဲ့။ အဲဒီတုံးက စ နိုင်ရင် ပြည် တွင်း ပြည်ပလက်တံရှည်တဲ့သူဆီက စပွန်စာတွေ ရနိုင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ "တရုတ်ကို ကြောက်နေရတယ်" စကားနဲ့ ဦးအောင်မင်းက ပြည်သူ့ အ သည်းကို ခွဲလိုက်တော့ ဘာနဲ့ ကုစားရမှန်းမသိဖြစ်ပြီး ဒီပွဲကို ရက်ရွှေ့လိုက် ရတယ်။ အဲသလိုပဲ စပွန်ဆာတွေနဲ့ လာသူလည်း ပြန်ပေါ်မလာတော့ဘူး။ ရှိစေ။
ဒီပွဲအတွက် ဖိတ်ကြားရာမှာ (ယုံရခက်တဲ့) အခက်အခဲက နာမည်ကြီး နိုင် ငံရေးပါတီကြီးနဲ့ ဆက်စပ်နေတယ်။ သူတို့ဖိတ်ကြားလိုတာက
၁။ လက်ရှိအစိုးရထဲက ဥပဒေပြု လွှတ်တော် အမတ်တွေ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့် ရှိသူတွေ
၂။ အတိုက်အခံ နိုင်ငံရေးပါတီက ဥပဒေပြု လွှတ်တော် အမတ်တွေ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့် ရှိသူတွေ နဲ့
၃။ ပွင့်လင်းအဖွဲ့အစည်းထဲက စွမ်းဆောင်နိုင်သူတွေ ( ဦးကိုကိုကြီးက ဒီအဖွဲ့ကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်)
၁ နဲ့ ၃ က လျောလျူခဲ့ပေမဲ့ ၂ က ထစ်နေတယ်။ ဖိတ်ကြားတဲ့အဖွဲ့ကလည်း (ဘာအဖွဲ့မှ မဟုတ်တဲ့အဖွဲ့ လို့နာမည်ပေးရင် ရနိုင်မယ်) ကြီးကြီးမားမား မဟုတ်လေတော့ အဆက်အသွယ်ရှိတဲ့ အတိုက်အခံ နိုင်ငံရေးပါတီက လွှတ်တော်အမတ်တွေဆီ ဖိတ်စာပို့လိုက်ကြတာပေါ့။ ဒီဖိတ်စာက ပါတီကို ဖိတ်ပေမယ့် ဘိုင်နိမ်းဖြစ်နေလေတော့ ဒီလိုလာလုပ်လို့ မရဘူး အပေါက် ဖြစ် သွားပြန်ရော။ ဒါနဲ့ ပြန်ပြင်ပြီးဖိတ်ကြားလိုက်ပေမယ့် အရင်တစ်ခါ လေသံက မာထားတော့ ..ဒီအဖွဲ့ရဲ့ဖိတ်စာကို အဂျင်ဒါထဲ ထည့်မထားရဲတဲ့ အပြင် အဲနီး အားသား ဘစ်စနစ် (Any other business) နဲ့တောင် ကကြိုးရှုပ်သွားတော့.... စောင့်သူကစောင့် သတင်းမပြန်သူက မပြန်။ အင်း... မြန်မာတွေ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ကိုးကွယ်မှူက ဘာမှ ပြန်မပြောရဲခြင်းနဲ့ မှတ်ကျောက်တင်ဟန်တူရဲ့။ ကန်တော့ပါရဲ့။ ဒီစံနဲ့ ဆက်သွားရင် အဏာရှင် များ ဆန်သွားလေမလား။
ငါ့နောက်ကို ဘယ်သူမှ မလိုက်ခဲ့နဲ့
ငါ့အရိပ်တောင် ငါ့နောက် မလိုက်ခဲ့နဲ့
မိတ်ဆွေတချို့ကလည်း ဒီပွဲမျိုးတွေလုပ်ဖို့ အချိန်မရောက်သေးဘူး။ စော လွန်းသေးတယ်လို့ ယုံကြည်ကြတယ်။ တချို့ကတော့ မစောတော့ဘူး။ လုပ်ကို လုပ်ရတော့မယ်။ အင်တာနေရှင်နယ် ကုမ္ပဏီကြီးတွေဝင်လာလို့ ဒါလေးတွေမှ မသိသေးရင် ခံသွားရမယ်။ Agree to disagree ပေါ့ ။ နောက်ပြီး စင်္ကာပူရဲဆီက အချိန်မီ ခွင့်ပြုမိန့်ရဖုိ့။ ဒါတွေကတော့ လက်ပွတ်တတီး လောကဓံပါ။ မထူးတော့ပါဘူး။ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး မှာကတည်းက ရဲ မျက်စေ့ကျခဲ့တဲ့ အဖွဲ့ပဲ။ ချိုမြမြ လောကဓံပါ။
မနေ့ညကမှ စပွန်ဆာအကြောင်း ဦးတင်မောင်ဝင်းနဲ့ ထပ်ပြီး ကွန်ဖန်း လုပ်တော့ ပုံမှန်ဖောက်သည်တွေဖြစ်တဲ့ MAI နဲ့ ရနံ့သစ်တို့ဆီကပဲ ရကြောင်း ထပ်သိရပါတယ်။
ဒါဖြင့် ကျန်တဲ့ ကုန်ကျစရိတ်တွေကရောဆိုတော့ "အရင်အတိုင်းပေါ့၊ အိပ် စိုက်။ တို့ လေးယောက် တစ်ယာက် တစ်ထောင်ဆီစုထားတယ်" တဲ့။
သူတို့နဲ့ ကျနော် စ သိကြတာက ၂၀၀၇ မှပါ။ ဒီမတိုင်ခင်ကတည်းက နာ မည်တွေ မြေကြီးပေါ်ပစ်ချ၊ ကိုယ့်အိပ်ကပ်ထဲကစိုက်ပြီး (အခုတော့မသိဘူး၊ အရင်ကတော့ စေတနာရှင် မျက်စေ့ကျတဲ့ အလုပ်မျိုးလည်း မဟုတ်ဘူးလေ၊ ၂၀၀၇ ခု ရဲအလိုက်ခံနေရတုံးကဆို သူတို့ကို ရှောင်ပြေးနေတဲ့လူတွေ အများ ကြီး၊ စတေးထိမှ ကြောက်လို့၊ အခုတော့ ဒီမိုကရေစီက လွတ်လွတ်လပ်လပ် စီလို့ရပြီ) ယုံကြည်ရာလုပ်နေခဲ့ကြတဲ့ ဒီ အဖွဲ့လေးရဲ့ အလုပ် သမားနေ့အောင်မြင်မှုကို ခံစားရသမျှလေး အသိပေးရင်ဖွင့်ချင်စိတ်တွေ ပေါက်နေတာနဲ့......။
စာကြွင်း။ ဘုဘောက်ချင်း တည့်တယ်ဆိုရမလား။ ရန်ဖြစ်နေသလိုပြောတတ် တဲ့ (ဦး)သီဟနာဒ နဲ့ ဆရာဦးတင်မောင်ဝင်းတွေ့တော့လည်း အချောပဲ။ ဦးတင်မောင်ဝင်းက "လေးယောက် တစ်ယာက် တစ်ထောင်ဆီစုထားတယ်" ဆိုတော့ "မလုပ်နဲ့လေ၊ ကျုပ်လည်း တစ်ခြမ်းတော့ ပါမှာပေါ့၊ ၅၀၀ ထား။ ဘုန်းကြီးတော့ လျှော့ဈေးနဲ့ ပေးပေါ့" ဆိုပြီး ၅၀၀ ထည့်တော့ လေးယောက် ခွဲ ဖြစ်သွားတယ်။ (ဦး)သီဟနာဒက "ကောင်းတယ်၊ ဒီအလှူမျိုးက ရေစက်ကို မချရတာ" လို့ ကျနော့ကို ပြန်ပြောပြတယ်။
ပွဲဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် တတ်နိုင်တဲ့ဖက်က ဝိုင်းဝန်းကူညီကြသူတိုင်း ကို လေးစား။ ဂုဏ်ယူမိစွာဖြင့်..........
ကျန်ကျောင်း၊ ကျောက်စီဓားနဲ့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် (၃ )
in Politics, ဇင်ဝေသော် - on 4/26/2013 - No comments
"ဘုန်းကြီးလူထွက်က ဘုန်းကြီးကျောင်းကို ပြန် ကပ်စားနေ ရင် ရှက်စရာကောင်းသလို စစ်တပ်လူထွက်က စစ်တပ်ကို ပြန်ကပ်စားနေ လည်း အဖြစ်မရှိရာ ရောက်တာပါပဲ"
၁ ။ စစ်တပ်က ဘယ်နည်းနဲ့ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရကို အကူအညီ ပေးနိုင်မလဲ။
၂ ။ အကျင့်ထက် စစ်တပ်အရာရှိငယ်တွေ စိတ်ဓာတ်ပျက်သွားတာက ပိုဆိုးတယ်။ (အကြီးတွေက အများစု ပျက်ပြီးသား)
ဒုတိယဝါကျကို အရင်ဆွေးနွေးပါမယ်။ စစ်ဖက်ဆိုင်ရာ ရိုးသားတဲ့ အရာရှိ ငယ်တွေပါ စိတ်ဓာတ်တွေပျက်နေတယ်။ ဘယ်သူ့လက်ချက်လည်းဆိုတော့ ဆရာ့ ဆရာကြီးတွေလက်ချက်။ ဘယ်လိုပျက်တာလည်းဆိုတော့ စစ်မှုထမ်းရင်းနဲ့ အရပ်ဖက်ဆိုင်ရာ ဝင်ငွေကောင်းတဲ့ ဌာနတွေကို မျက်စောင်းထိုးနေခြင်းပဲ။ စစ်တပ်က အနားယူရရင်တောင် ဗိုလ်မှူးက ဘယ်ရာထူး၊ ဗိုလ်မှူး ကြီးက ဘယ်ရာထူး၊ ဗိုလ်မှူးချုပ်က ဘယ်ရာထူး၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးက ဘယ်ရာ ထူး စတာတွေ စီစဉ်ထားလေတော့ စစ်ထဲဝင်တာကကို နိုင်ငံတော်ကာကွယ် ဖို့ထက် စစ်လူထွက်ရင် ရာထူးကြီးကြီးရဖို့တွေ ပါနေတော့ လမ်းကြောင်း လွဲနေပြီ။
ဒါတွေကြောင့် ဟိုတုန်းက တပ်မတော်လို့ ခေါ်ရာကနေ အခု စစ်တပ်ဖြစ် သွားတယ်။ ဟိုတုန်းက စစ်မှုထမ်းဟောင်းကြီးတွေက မချမ်းသာကြဘူး။ ဒါပေမဲ့ လူထုက လေးစားကြတယ်။ ကမ္ဘာမှာကလည်း ဒီအတိုင်းပါပဲ။
အခု စစ်တပ်ပြုတ်တွေက ကျိကျိတက်ချမ်းသာပြီး လူထုရဲ့ ချဉ်ဖတ်ဖြစ်နေ တယ်။
အဲဒီကစလို့ ရာထူးမြန်မြန်တက်ရေး၊ ဌာနကောင်းရရှိရေး ကြိုးစားရင်းနဲ့ လူကြီးကြိုက်လိုက်ရင်း ပြည်သူကို ခြေကန်တော့တာပဲ။ စစ်သားနဲ့ အရပ်ဖက်ရာထူးဟာ (အောက်စတန်းဒင်းတချို့ကလွဲရင်) ဘာမှ မဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့ အသိ အရာရှိငယ်တွေဆီ ပြန်ရောက်သွားမှ ဒီစစ်တပ်ဟာ နေရာ မှန်ပြန်ရောက်တယ်လို့ ဆိုနိုင်တော့မယ်။
ဦးသိန်းစိန်ကို ကူနိုင်တာက ပြည်သူထက် စစ်တပ်က ပို အခရာကျတယ်။
စစ်တပ်က ဘယ်နည်းနဲ့ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရကို အကူအညီ ပေးနိုင်မလဲ??
စစ်တပ်နဲ့ ဝေးဝေးနေလေလေ ဦးသိန်းစိန် သိက္ခာတက်လေလေပဲ။ ယဉ်ကျေး ၊ ရင့်ကျက်တဲ့ လူအဖွဲ့အစည်းတွေမှာ စစ်တပ်ဆိုတာ ဘယ်နိုင်ငံရေးပါတီကိုမှ အားမပေးရပါဘူး။ ဘယ်ပါတီရဲ့ စစ်တပ်မှ ဖြစ်မနေရဘူး။ တစ်ဦးချင်း အနေ နဲ့တော့ ကြိုက်တဲ့ပါတီကို ထောက်ခံပေါ့။ စစ်တပ် အနေနဲ့ကတော့ ကြားပဲနေ ရမယ်။ အမေရိကန် စစ်တပ်ဟာ ဒီမိုကရက်တစ်ရဲ့ လက်ကိုင်ဒုတ် မဟုတ် သလို ရီပတ်ဘလင်ကန်ရဲ့ ငယ်ကျွန်လည်း မဟုတ်ပါဘူး။
အပြင်မှာ ဘာတွေပြောပြော အပြောပဲ အဖတ်တင်တယ်။ ရိုးသားတဲ့၊ လွတ် လပ်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲမှာ သူထည့်ချင်ရာ သူထည့်တာပဲ။ သာဓက အနေနဲ့ အသိအမှတ်ပြု မခံရတဲ့ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲကို ကြည့်ပါ။ စစ်တပ်ထဲမှာကိုပဲ အဖွဲ့ချုပ်ကို ထောက်ခံနေတာတွေ အများကြီးပဲ။ ဒါဆို ရွေးကောက်ပွဲမှာ စစ်တပ်ကနောက်ခံပေးထားတယ်ဆိုတာ ကြားရဆိုးတာပဲရှိတယ်။
စိတ်ကြိုက် လူစု၊ စိတ်ကြိုက် ကွင်းရွေး၊ စိတ်ကြိုက် ဒိုင်လူကြီးတင်၊ စိတ်ကြိုက် လေ့ကျင့်၊ စိတ်ကြိုက် အချိန်ရွေးထားတာတောင် အသင်းခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ပဲ မားမားမတ်မတ်ရှိတဲ့ အဖွဲ့ချုပ်ကို စစ်တပ်မပါဘဲ မယှဉ်နိုင်ရင်တော့ အဓိပ္ပါယ်လည်း သိပ် မရှိတော့ပါဘူး။ (အဓိပ္ပါယ်မရှိတာကတော့ ကြာပါပြီ၊ အခု ရှိမလားလို့ပါ)
စစ်တပ်က အရာရှိကြီးတွေ အရပ်အစိုးရအဖွဲ့ထဲ မပါတာနဲ့ နိုငံ ပျက်မလောက် ပြောနေကြတာကလည်း မမိုက်ပါဘူး။ စစ်တပ်က နိုင်ငံရေးထဲ မပါတာပဲ ရှိမယ်၊ စစ်တပ်ကြီး ဖျက်သိမ်းတာမှ မဟုတ်ဘဲ။ ထစ်ကနဲဆို ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးချုပ်က အာဏာသိမ်း၊ ရာစုဝက် အုပ်ချုပ်၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ငယ်တွေကို မဆိုင်တဲ့ ရာထူးတွေပေး၊ ငွေမက်အောင် ကျုံးသွင်း၊ မလှမပ အတိတ်နဲ့ စစ်တပ်။ သူတို့ သူ့နေရာ သူနေမှ နိုင်ငံလည်း သိက္ခာရှိမယ်။
အချုပ်ပြောရရင် ဘုန်းကြီးလူထွက်က ဘုန်းကြီးကျောင်းကို ပြန် ကပ်စားနေ ရင် ရှက်စရာကောင်းသလို စစ်တပ်လူထွက်က စစ်တပ်ကို ပြန်ကပ်စားနေ လည်း အဖြစ်မရှိရာ ရောက်တာပါပဲ။
၂၀၁၅ မှာ စစ်တပ်က စစ်တပ်နေရာမှာ ပြန်ရောက်သွားရင် ရှုံးသည်ဖြစ်စေ နိုင်သည်ဖြစ်စေ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရ ဒီထက် သိက္ခာရှိမယ်။
ရှင်းသန့်စိမ်းလဲ့ကျွန်း (၉း၃)
in Hard Truths By Lee Kuan Yew, ဇင်ဝေသော် - on 4/25/2013 - No comments
နိုင်ငံတိုင်းက ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ပဲ ကြိုးစားနေကြရတာ။ မကြိုးစားရင် လည်း ပြည်တွင်းထဲမှာ ပြဿနာတက်မယ်။ ဒါကြောင့် ငါ့သုံးသပ်ချက် က ပြောင်းလဲလာမယ့် ရာသီဥတုနဲ့မျှတအောင် နေဖို့ပဲကြိုးစား။ ကမ္ဘာမြေ ပူနွေးလာမှုဒဏ်ကို တရုတ်တို့၊ အိန္ဒိယတို့ ကြုံတွေ့လာရပြီဆိုတော့မှ သူတို့ တစ်ခုခု လုပ်ကိုလုပ်မှရတော့မှာလို့ သဘောပေါက်လာကြမှာ။ သူတို့ ကြိုတင် ခန့်မှန်းချက်အရ ဝင်ရိုးစွန်းရေခဲတွေ ပြိုကျလာပြီဆိုရင် ပင်လယ်ရေ မျက်နှာပြင်တစ်မီတာကျော်ကျော်လောက် မြင့်တက်လာမယ်တဲ့။ အဲဒါဆိုရင်တော့ တို့အတွက် ပြဿနာပဲ။ စင်ကာပူက အဆောက်အဦတွေကို ရေကာတာတွေနဲ့ ရေကိုကာလို့ ရနိုင်တဲ့ နည်းကို လေ့လာခဲ့ကြဖူးတယ်။ သူတို့ရဲ့နောက်ဆုံး ဆုံးဖြတ်ချက်က ပင် လယ်ရေ ကို ဆီးတားတဲ့ တံတိုင်းကြီးတွေ(Seawall) ဆောက်သင့်တယ်တဲ့။ အဲသလိုဆိုရင် ငါတို့သင်္ဘောဆိပ်ကမ်းက ရေကာတံတိုင်းတွေရဲ့အပြင်ဖက်မှာ ပဲ ရှိနေလိမ့်မယ်။
ဒါဆိုရင် တို့ပတ်ဝန်းကျင်က ကျွန်းလေးတွေရော တစ်ကျွန်းစီကွဲထွက်သွားနိုင် မလား။
ဒါဆိုရင် စင်ကာပူက အဲဒီကျွန်းစုလေးတွေရဲ့ အလယ်မှာ ရှိနေလိမ့်မယ်။ ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အကျိုးဆက်က မရှင်းမလင်းပါပဲ။
ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင် တစ်မီတာအထိ မြင့်တက်လာမယ်ဆိုရင် ငါတို့ ကမ်းခြေတစ်ချို့ ဆုံးရှုံးလိမ့်မယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ရှင်သန်နေလို့တော့ ရတယ်။ ဆိုပါတော့ ခြောက်မီတာလောက်အထိလည်း မြင့်တက်လာမယ်၊ ရေကာတာ တံတိုင်းကြီးတွေလည်း ဆောက်မထားမိဘူးဆိုရင်တော့ စင်ကာပူရဲ့ ငါးပုံ တစ်ပုံ က ပင်လယ်ရေအောက် ရောက်သွားလိမ့်မယ်။
မေး။ ။ နောက်ဆုံး ဖြစ်နိုင်ခြေက ဘာဖြစ်မလဲ။
ဖြေ။ ။ ငါက မိုးလေဝသကျွမ်းကျင်သူမှ မဟုတ်တာ။ ဘာတွေဖြစ် လာနိုင်မလဲဆိုတာ ဘယ်တွက်ချက်တတ်မှာလဲ။ ကျွမ်းကျင်သူတွေပြောတာ ကို လက်ခံလိုက်ဖို့ပဲရှိတာပဲဥစ္စာ။
မေး။ ။ အဲယားကွန်းတွေကို မှီနေမယ့်အစား အဆင့်မြင့် အပူပိုင်းမြို့တော်အဖြစ် တည်ဆောက်ယူရင်ကော မရနိုင်ဘူးလား။
ဖြေ။ ။ ရာသီဥတုကို တို့ကပြောင်းမပစ်နိုင်ဘူး။ တကယ်တော့ မြို့ တိုင်းဟာ ပိုပိုပြီး ပူလာနေတာပဲ။ ကွန်ကရစ်တွေ၊ ကားလမ်းတွေက အပူငွေ့တွေ ပြန်ဟပ်နေလို့။ တို့အိမ်တွေမှာ လေဝင်လေထွက်ရအောင် လုပ်နိုင်ရင်တော့ အဲယားကွန်းမသုံးပဲနေလို့ ရနိုင်မှာပေါ့။ ဒါပေမယ့် အိမ်တွေအားလုံး အပြင်လေရနေဖို့ဆိုတာက မဖြစ်နိုင်ပြန်ဘူး။ မြင့်တဲ့ တိုက်တွေက နိမ့်တဲ့တိုက်တွေကို ကွယ်နေမှာ။
ကုန်ထုတ်လုပ်မှု မလျော့ကျစေပဲ ရုံးတွေက အဲယားကွန်းတွေကို ဖြုတ်ပစ်ဖို့ ဘယ်လိုလုပ် ဖြစ်နိုင်မှာလဲ။ ၁၉၅၀- ခုနှစ်တွေတုန်းက Laycock and Ong ဥပဒေရေးရာကုမ္ပဏီမှာ ငါလုပ်နေတုန်းက ရှေ့နေတွေရဲ့အခန်းတွေပဲ အဲယား ကွန်းတတ်နိုင်တယ်။ ဈေးကကြီးတာကိုး။ စာရေးတွေ၊ တခြားအလုပ်သမားေ တွက လဟာပြင်ရုံးမှာ လုပ်ကြတာ။ ပန်ကာတွေ တအားဖွင့်ထားပြီး စာရွက်ေ တွဆို လွင့်မသွားအောင် ဖိထားကြရတာ။ နေ့လည်စာ ထမင်းစားပြီးလို့ နေပူ ရှိန်လည်း တက်လာရော စာရိုက်မှားတာတွေဖြစ်လာ၊ လုပ်အားကျဆင်း မှုတွေ ဖြစ်လာတယ်။ ၁၉၅၅- ခုမှာ ငါကိုယ်တိုင်ရုံးဖွင့်တော့ တစ်ရုံးလုံးကို အဲယားကွန်းတပ်လိုက် တယ်။ ရုံးကတော့ ခပ်သေးသေးပေါ့။ မလက္ကာလမ်း၊ အမှတ် ၁၀၊ ပထမ ထပ်မှာ။ ဒီတော့ နေ့ခင်းမှာတောင် လုပ်အားက ကျဆင်းမသွားဘူး။
အပူနဲ့နီးနီးကပ်ကပ်လုပ်ရတဲ့ အလုပ်တွေ၊ လက်အိတ်တွေ၊ ခေါင်းစွပ်တွေ စွပ် ထားမှ လုပ်လို့ရတဲ့ အလုပ်ရုံတွေမှာ အဲယားကွန်းမရှိပဲ အလုပ်လုပ်လို့ ဘယ် ရနိုင်ပါ့မလဲ။
ဒီတော့ တို့မှာ ရွေးစရာမရှိတော့ဘူး။ တိုက်မြင့်မြင့်တွေ ဆောက်ဖို့ပဲရှိတယ်။ ဟိုတုန်းကလို နှစ်ထပ်၊ သုံးထပ်အိမ်တွေ မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။ အစ္စတာနာ မှာရှိတဲ့ အိမ်ဆိုရင် ၁၈၆၀- ခုနှစ်တွေက ဆောက်ထားတာ။ အရှေ့မြောက် ဘက်ကို မျက်နှာမူပြီး အနောက်တောင်ဖက်ကလာတဲ့ မုတ်သုံလေ ကိုရ တယ်။ နေပူကို ကာကွယ်နိုင်တဲ့ ကော်ရစ်ဒါကလည်း တော်တော်ရှည်တယ်။
၁၉၅၀- ခုနှစ်တွေတုန်းက သူတို့ကဖိတ်လို့ အိန္ဒိယကိုရောက်ဖူးတယ်။ တုတ် တံရှည်ရှည်ရဲ့ထိပ်မှာ အဝတ်စချည်ထားတယ်။ တုတ်တံကို တစ်ယောက်ေ ယာက်က ရွှေ့ပေးရင် အဲဒီအဝတ်စက ယပ်ခပ်နေသလို လေရတယ်။ ဒါကို အိန္ဒိယန်းတွေက punkah wallah လို့ ခေါ်တယ်။ မွတ်ဆလင်လူမျိုးတွေအိမ်မှာ ထောင့်ချွန်းလေးတွေပါတဲ့ တံခါးပေါက်၊ ဝရန် တာတွေကို ရေဖြန်းပေးကြတယ်။ ရေက အပူငွေ့ကို စုပ်ယူတာပေါ့။ ရေ ကနေဖြတ်လာတဲ့ လေကြောင့် အိမ်ခန်းထဲမှာလည်း အေးလာတာပေါ့။ တို့နေရာက ပင်လယ်ကမ်းခြေကလွဲရင် လေဝင်လေထွက်ကောင်းတဲ့နေရာ မဟုတ်ဘူး။
မလေးတွေ အပူဒဏ်ကို ဘယ် လိုကာကွယ်ကြသလဲ။ သူတို့အိမ်တွေက ခြေတံရှည်၊ သက်ငယ်မိုး၊ သစ်သား ဝါးနဲ့ ဆောက်ထားတာ။ တံခါးမ၊ တံခါးပေါက်တွေကလည်း ဖွင့်ထားကြတာ။ မျက်နှာကျက်တွေဘာတွေလည်း မလိုဘူး။ လေမတိုက်ဘူးဆိုရင်တောင်မှ သူတို့အိမ်တွေထဲမှာ နေလို့ရတယ်။ ယောင်္ကျားရော၊ မိန်းမရောက လုံချည်တွေဝတ်ကြတယ်။ ဒီတော့ သူတို့ခန္ဓာ ကိုယ်အောက်ပိုင်းကလည်း လေရတယ်။ ယောက်ျားတွေဆိုရင် အပေါ်ပိုင်း ရင်ဘတ်ဟောင်းလောင်းတောင် နေကြတယ်။ အဲဒါ ငါတို့ ရာသီ ဥတု အခြေ အနေပဲလေ။
မေး။ ။ လျှပ်စစ်နဲ့မောင်းတဲ့ကားတို့၊ ခရီးသွားစစ်စတန်တစ်ခုလုံး ဘက် ထရီ နဲ့မောင်းတဲ့ပုံစံအထိ ရောက်နိုင်အောင်ကော ဘယ်လိုရှိမလဲ။ စင်ကာပူရဲ့ ရာသီဥတုကို ပိုကောင်းလာစေနိုင်မလား။
ဖြေ။ ။ ဒါက လုပ်ကို လုပ်ကြရမှာ။ အခု ဓာတ်ဆီနဲ့ ဘက်ထရီပေါင်း စပ်မောင်းနှင်တဲ့စနစ်ကို စတင်နေကြပြီ။ အီလက်ထရစ်ကားဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက် ကုမ္ပဏီကြီးတွေက R & D(Research and Development) ကို အလေး အနက်ထား လုပ်နေကြတယ်။ သူတို့ကားတွေက ဓာတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်နဲ့မောင်းတဲ့ ကားတွေလိုပဲ ကောင်းတယ်။ ပြဿနာက ဘက်ထရီက ဘယ်လောက်ကြာ ကြာခံပြီး ဘယ်လောက်မြန်မြန် အားပြန်သွင်းလို့ရမလဲဆိုတာပဲ။ ဘတ်(စ်) ကားတွေရော ဂက်(စ်) ကိုသုံးပြီး မောင်းလို့ရတယ်။ ဒါကို တို့ဆက်လေ့လာ မှာ။
မေး။ ။ ဆိုလာပြားတွေရော ဘယ်လိုနေမလဲ။ စင်ကာပူလို အပူ ပိုင်းမြို့မှာ ဆိုလာပြားတွေ အလုပ်ဖြစ်မယ်လို့ ထင်သလား။
ဖြေ။ ။ ၁၉၉၂- ခုကတည်းက ပြင်သစ်ရေနံကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ တို တယ်(Total) မှာ အကြံပေးအနေနဲ့ ရှိခဲ့တယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၇- နှစ်သက်တမ်း တစ်လျှောက်လုံး ရေနံ၊ ကျောက်မီးသွေး၊ နူကလီးယား စွမ်းအင်ကိုသုံး လိုက် ရင် ဖရီကွန်စီကိုပြတဲ့ဇယားက ဒီလို(သူ့လက်ကို အပေါ်မြှောက်ပြ တယ်) ဖြစ် ပြီလေ။ ဆိုလာ၊ ဒီရေစတာတွေကို အစားထိုးပြီးသုံးလိုက်ရင် သူတို့ဖရီကွန်စီပြဇယားက ဒီလို(သူ့လက်ကို အောက် ချပြတယ်) ဖြစ်သွား မယ်။
ဆိုလာပြားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ဂျာမန်တွေတော့ သုတေသန လုပ်နေကြ တယ်။ ဆာဟာရ သဲကန္တာရက နေကိုတနှစ်ပတ်လုံးရရင် ဥရောပမှာ လိုအပ် တဲ့စွမ်းအင် အကုန်ထုတ်ပေးနိုင်မယ်လို့ ဆိုကြတယ်။ ဒါပေမယ့် (ရယ်လျှက်) ဒီအတွက် ကုန်ကျငွေက ဘယ်လောက်ရှိသွားမလဲ။ သဲမုန်တိုင်းတွေ ကျလာ ပါပြီတဲ့။ ဆိုလာပြားတွေ အာလုံး သဲအောက်ရောက်ကုန်မှာ။ အဲဒီ ဆိုလြာ ပားတွေကို ဘယ်သူက ပြန်ဖော်မှာတုန်း။
ငါတို့ အဆောက်အဦတွေအားလုံးရဲ့ အမိုးပေါ်မှာ ဆိုလာပြားတွေ တပ်ဆင် ထားမယ်ဆိုရင်တော့ လျှပ်စစ်သိုလှောင်ရုံနဲ့ သိုလှောင်ထားပြီးတော့ မီး အိမ်တွေအတွက်၊ ရေနွေးကြိုချက်ဖို့အတွက် တို့သုံးလို့ရမှာပေါ့။ ဒါပေမယ့် မိုးရွာတဲ့နေ့၊ တိမ်အုပ်တဲ့နေ့တွေမှာ စွမ်းအင်အလုံအလောက် မရနိုင်ပြန်ဘူး။
ဒါက ဖြစ်တော့ ဖြစ်လာမှာပါ။ အခု တရုတ်တွေလုပ်တဲ့ ဆိုလာပြားတွေက ပိုကောင်းပြီး ဈေးလည်း ပိုသက်သာတယ်။ လေနဲ့လည်တဲ့ ပန်ကာတွေလည်း ရှိနေပြီ။
in ဇင်ဝေသော်, မောနင်း ပို့စ် - on 4/25/2013 - No comments
ဂျာမဏီ ၈ စပိန် ၁။
လူးဝစ် ဆွာရက် ၁၀။
မန်ယူ၊ ဗန်ပါစီ ၂၀။
တရုတ်က အိန္ဒိယကို လူဦးရေများလို့ အပြစ်တင်။ ဟဲ ဟဲ။
ရော်နာဒို တစ်ဂိုးပြန်ရတာကလွဲရင် ဒီနေ့လည်း ဂျာမန် ဒေါ့မန်က စပိန်က ရီယယ်ကို လေးဂိုး ဆော်လိုက်ပြန်ပြီ။ လေးဂိုးစလုံး လူဝစ်ဒေါ့စကီး တစ်ယောက်ထဲ ရှူးတာ။
ဆီမီးနှစ်ပွဲပေါင်းတော့ ဂျာမန် နှစ်သင်း ၈ ဂိုး၊ စပိန် နှစ်သင်း ၁။ ကိုးနဝင်း အတိ။ ဂျာမန် ရီဗော်လူးရှင်း တစ်ခေတ်ဆန်းပြီ။
လူးဝစ် ဆွာရက် ကတော့ ငုံ့ကိုက်မိတာလေးနဲ့ ၁၀ ပွဲ ထိပြီ။ သူ့ထက် ပွဲပယ် ပိုများတာက ဒိုင်လူကြီးကို တွန်းလှဲတဲ့ ဒီကာနီယို (အခုဆန်းဒါးလင်း နည်းပြ) တဲ့။ ၁၁ ပွဲ။
သူ့ပြေးလမ်းကို အီဗန်နိုဗစ်က လက်မောင်းနဲ့ ကာထားလို့ ကာထားတဲ့ လက်မောင်းကို စိတ်တိုတိုနဲ့ ကိုက်မိတာဖြစ်မယ်။ အယူခံဝင်လည်း ၁၀ ပွဲ ပယ်က မလျော့လောက်ပါဘူး။
နောက်နှစ်အထိ ၆ ပွဲ ပါသွားမယ်။ တော်တော်ထက်တဲ့ သွား။
မန်ယူ ချန်ပီယံဖြစ်တဲ့ အကြိမ်နဲ့ ဗန်ပါစီရဲ့ ကျောနံပတ် သွားပြီးတိုက် ဆိုင်နေတယ်။
ဒါထက်ရယ်စရာကောင်းတာက ပရိသတ်ထဲက စာတမ်း။ "Not nineteen forever." တဲ့။ ပြိုင်ဖက် လီဗာပူးလ်ကို လှမ်းနောက်တာ။ ပြောမယ်ဆို ပြော စရာပဲ။ လီဗာပူးလ်ကလည်း နီးယား ဖြူချားမှာတော့ ၂၀ လမ်းမမြင်။
ဒီစာတမ်းကလည်း လူးဝစ် ဆွာရက် အနားရှိရင် အကိုက်ခံရမယ့်ကိန်းပဲ။
အမေရိကမှာ ဦးသိန်းစိန်တို့က ငြိမ်းချမ်းရေးဆုတွေ ဘာတွေ ရလို့ ဆိုပါ လား။ မြင်းမီးဆွဲ ဦးအောင်သောင်းတို့တောင် ဝေစုတွေ ရလို့။
ဂျွန်ကယ်ရီက မြန်မာကို "ဘရိုက် စပေါ့တ့်" တဲ့။ မိုက်တယ်၊ ဟုတ်ဟုတ် မဟုတ်ဟုတ်။
အမေရိကမှာဆိုတော့ ဆန္ဒပြတာတော့ ခံရမှာပေါ့။ ဥရောပက ပြင်သစ် လူ မျိုးတွေနဲ့ အာရှတိုက်သားတွေက ဆန္ဒပြခွင့် ရလို့ကတော့ အသေ ပြတာပဲ။ မဆန်းပါဘူး။ မယုံရင် အိန္ဒိယသွားကြည့်။ အကြီး အသေးပဲ ကွာမယ်။ နေ့ တိုင်း ဆန္ဒပြပွဲရှိတယ်။
တရုတ်က အိန္ဒိယကို လူဦးရေများလို့ အပြစ်တင်
သူတို့လည်း (အိန္ဒိယတွေ) တရုတ်နဲ့တွေ့တော့ ခံရတာပဲ။ လူဦးရေများပြီး လူဦးရေထိမ်းချုပ်မှု မလုပ်လို့ တရုတ်က ဝေဖန်နေတယ် တဲ့။
ကဲ.... အဲဒါ တရုတ်။ လူးဝစ် ဆွာရက်ကို အကိုက်ခိုင်းလိုက်ရ။
in 3D ဘာသာရေး, သီဟနာဒ - on 4/24/2013 - No comments
အောက်မှာ မျက်ရည်တွေနဲ့ မိသားစုတစ်စု ရောက်နေလို့ အောက်ကို ခဏ ဆင်းခဲ့ဖို အတွင်းရေမှုးက ဖုန်းဆက်သည်။
ကျေးဇူးရှိသည့် မိသားစုဟုဆိုရမည်။ သတိပဋ္ဌာန်သင်တန်းများကို တာဝန် ယူ ဆောင်ရွက်ပေးနေသည့် ဒကာမ မိသားစုဖြစ်သည်။
အဖေ၊ အမေ၊ သားနှစ်ယောက်စလုံး မျက်ရည်တွေနဲ့မို့ ဘာများဖြစ်ပါလိမ့်ဟု စိုးရိမ်နေစဉ်မှာပင် ဒကာက
" မက်သယူးရဲ့ ခွေးလေး သေသွားလို့ တစ်အိမ်လုံး သောကရောက်နေကြ ရတယ်" တဲ့။ (မက်သယူး သားအကြီး၊ ၁၃ နှစ်သား)
မာတင်ကရော ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့
"မာတင်က အဲဒီခွေးလေးကို လေ့ကျင့်ပေးနေတာ၊ တော်တော်တတ်နေပြီ" ဟု အဖေလုပ်သူက ဖြေသည်။
မည်သို့ဖြစ်စေ သူတို့ကို ဘလက်ဇင်းလုပ်ပေးဖို့ လျှောက်ထားသဖြင့် ဘလက် ဇင်းလုပ်ပေးလိုက်သည်။
မမေးဖြစ်တောပေမဲ့ မိဘတွေကရော ဘာဖြစ်လို့ ဒီလောက်ကြီး ငိုနေရတာ လဲဟု တွေးမိသည်။ မျက်ရည်စို့ရုံမျှ မဟုတ်ကြ။ ခွေးလေး အတွက်လား ၊ ခွေးသေလို့ ဝမ်းနည်းနေသည့် သားနှစ်ယောက်အတွက်လား။
မိဘများအတွက် ခွေးသေလို့ထက် ခွေးသေလို့ဝမ်းနည်းနေသည့် သားနှစ်ယောက်အတွက်က ပိုနေနိုင်သည်ဟု မဆီမဆိုင် တွေးနေမိသည်။
ခွေးအတွက် ရေစက်ချ အမျှဝေပေးပါဦး လျှောက်ထားသဖြင့် ဆွမ်တစ်ရက် အကပ်ခိုင်းပြီး အမျှဝေပေးလိုက်ရသေးသည်။ မိမိအတွက် မကြုံဖူးသဖြင့် ထူးသွား၏။
in ဇင်ဝေသော်, မောနင်း ပို့စ် - on 4/24/2013 - No comments
အရင်ညက ဗီလာကို မန်ယူ သုံးဂိုး ဂိုးမရှိနဲ့ နိုင်တာက သတင်းကြီး မဟုတ်ေ ပမဲ့ ဒီည ချန်ပီယံလိဂ်မှာ ဘေယာမြူးနစ်က ဘာစီလိုနာကို လေးဂိုး ဂိုးမရှိ နဲ့ နိုင်တာကတော့ သတင်းကြီးပဲ။ ဂျာမန်ဘဏ်နဲ့ စပိန်ဘဏ်တွေလိုပဲ။ မက်စီ ဂိုးမသွင်းတဲ့နေ့လည်း ရှိသေးတာကိုး။
ဘာပဲဆိုဆို တစ်ပတ်အတွင်းလူအဖတ်ဆုံးသတင်းကတော့ လီဗာပူးက လူး ဝစ် ဆွာရက်ဇ်ရဲ့ ချယ်လ်ဆီးက အီဗန်နိုဗစ်လက်မောင်းကို ငုံ့ ကိုက်တဲ့ သ တင်းပဲ။ ပုံပြန်ကြည့်တော့ တကယ် အသည်းအမဲ ကိုက်နေတာ တွေ့ရတယ်။ မကြည့်ရသေးရင် ကြည့်ကြည့်ပါ။ ရယ်ရတယ်။
လူးဝစ် ဆွာရက်ဇ်လုပ်လို့ ဝီကီပီးဒီးယားတောင် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုမှု ပြောင်း ထားရတယ်။ ဖတ်ကြည့်ပါ။
"bite" A bite isawound received from the mouth ( and in particular, the teeth,) of an animal, including humans and Luis Suarez.
"ကိုက်" ဆိုတာ တိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်၊ လူသားများ၊ လူးဝစ် ဆွာရက်ဇ် အပါအဝင် ရဲ့ ပါးစပ် (အထူးသဖြင့် သွားနဲ့) ကိုက်လို ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ ဒဏ်ရာ တဲ့။
လူးဝစ် ဆွာရက်ဇ် နာမည်ကို မနေ့ကမှ ထပ်ဖြည့်ထားရတာ။
နောက်ထပ်သတင်းက မိုက်ကရိုဆော့ဖ် ဆရာကြီး ဘီးလ်ဂိတ် က တောင်ကို ရီးယားသမ္မတ ဒေါ်ပါ့က် ကို လက်တစ်ဖက် (ဘယ်ဖက်) ဘောင်းဘီ အိပ် ထဲနှိုက်ရင်း ကျန်တဲ့ (ညာဖက်) လက်တစ်ဖက်တည်းနဲ့ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက် လို့ တစ်နိုင်ငံလုံး မကျေမနပ်ဖြစ်နေကြတယ်။ လက်ကိုင်ဒုတ်ရှိတဲ့ မီဒီယာေ တွရဲ့ အသံက အကျယ်းဆုံးပေါ့။
ယဉ်ကျေးမှု မတူတာလား၊ လေးစားမှု မရှိတာလားပေါ့။ သူတို့လိုပြောကြေးဆို အိုဗားမားလည်း ဒေါ်စုပါး မွှေးသွားသေးတာပဲ။ ရယ်စရာ နောက်တာကလွဲရင် မြန်မာတွေက အေးဆေးပါပဲ။
စောနေလို့ နောက်ထပ် သတင်းဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်အကြောင်းတော့ မပြောတော့ဘူး။ ပျော်စရာ မကောင်းလို့။
in ဇင်ဝေသော်, ပြုံးစိစိ - on 4/23/2013 - No comments
ခြံလှောင်ခံထားတဲ့ကျားအတွက် ဆိတ် အရှင်တစ်ကောင်ကို ခြံထဲသွင်းပေး လိုက်ပေမဲ့ အဲ့ဒီကျားက ဆိတ်ကလေးကို မစားဘဲ ဆိတ်နဲ့မိတ်ဆွေ ဖွဲ့ပြီး ဆော့ကစားလို့တောင်နေတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းကို 'the Time of India' က ဖော်ပြလာပါတယ်။
မဆာလို့ဘဲ မစားတာလားဆိုတာ သံသယရှိတဲ့ Bor နယ် မဟာရဋ္ဌတိုင်း (Maharashtra) တိရစ္ဆာန်ရုံစောင့်က ကျားကို လုံးဝအစာမကျွေးဘဲ နှစ်ရက် အငတ်ထားခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျား ဥပုသ်က သစ်ကြုတ် ဥပုသ် ဖြစ်မသွားဘဲ ဆိတ်ကလေးနဲ့ဆော့ကစားမြဲမို့ တိရစ္ဆာန်ရုံစောင့်က သနားပြီး အမဲသား အစိမ်း ကျွေးတော့မှ စားတော့တယ်တဲ့။
တိရစ္ဆာန်ရုံစောင့်ကတော့ ဒီကျားကို တောထဲပြန်လွှတ်လို့ ရ မရ စမ်းသပ် ကြည့်တာလို့ပြောတယ်။
တချို့ အွန်လိုင်းပရိသတ်ကတော့ ကျားနဲ့ဆိတ်က ဖေစ့်ဘုတ်မှာ ကိုယ့်ဓာတ် ပုံ အစစ်တွေ တင်ထားတဲ့ (အပြင်မှာ တကယ်တွေ့ရင်မှတ်မိတာပေါ့) ဖရင့်ဒ်တွေ ဖြစ်နေလို့နေမှာလို့ ကွန်မင့် ပေးနေကြတယ်။
ကျန်ကျောင်း၊ ကျောက်စီဓားနဲ့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် (၂ )
in Politics, ဇင်ဝေသော် - on 4/23/2013 - No comments
ဦးသိန်းစိန် မတိုင်မီ စစ်တပ်အရာရှိကြီးတွေထဲမှာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို လိုလားတဲ့ သူတွေ မရှိခဲ့နိုင်ဘူးလား?
လူတစ်ယောက်၊ ဗုဒ္ဓဘာသာတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဘေးက ကြည့်ရရင် ရှိနိုင်လောက်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ဟာ ငယ်စဉ်၊ ကျန်းမာ စဉ်မှာ ဘယ်လောက်ပဲ မိုက်လုံးထွားထွား အရွယ်ရောက်လာရင်၊ သေမလောက် ရောဂါတစ်ခုခု ဖြစ်ဖူးရင် ကြောက်စိတ်ဝင်လာပြီး ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေး နေသွားဖို့ ခဏဖြစ်ဖြစ် စိတ်ကူးတော့ ရမိတတ်ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီမှာ ပြဿနာက မိုက်လာတဲ့ကာလ၊ ပျက်လာတဲ့ကာလက ကြာလာတော့ အရှိန်လွန်နေပြီး ဘယ်က စပြင်ရမှန်း မသိ ဖြစ်သွားပုံ ရပါတယ်။ ဒါနဲ့ပဲ
“ကဲ … ဖြစ်ချင်ရာ ဖြစ်ကွာ”
ဆိုပြီး နေလာခဲ့ကြပုံ ရပါတယ်။
ပြုပြင်ပြောင်းလဲလိုက်မယ်ဆိုရင် ပျက်ခဲ့၊ မှားခဲ့၊ စားခဲ့တာတွေက ဗူးပေါ် သ လို ပေါ်ပြီး လက်ရှိနေတဲ့ အိမ်ပေါ်က ဆင်းပေးရမယ့် သဘောမျိုးတွေကို လည်း တွေးမိကြပါလိမ့်မယ်။ စားထားသမျှတွေ ပြန်အံထုတ်ရမယ့် အကြောက်တရားဟာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက် အကြီးမားဆုံး အဟန့် အတားကြီး ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။
ဒီအနေအထားတွေကနေ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ဦးသိန်းစိန်ကို ကောက်ရလိုက် တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အရင်ကတော့ သူ့ဘဝက မသိမသာပါပဲ။ သမ္မတဖြစ် တဲ့နောက်မှ သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဇာတ်လမ်းတချို့တစ်ဝက် ထွက်ထွက် လာ တယ်။ ဒီဇာတ်လမ်းတွေကို ခြေရာကောက်ကြည့်တော့ သူဟာ လူသားတစ်ေ ယာက်ရဲ့ အားနည်းချက် ရှိကောင်းရှိမယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်တဲ့ စစ်တပ်အရာရှိကြီးတစ်ယောက် လုံးဝ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ နားလည်လို့ ရ တယ်။ သူ့သမိုင်းကပဲ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို လက်ရဲဇက်ရဲ လုပ်ရဲဖို့ အားပေး လိုက်တာလို့ ယုံကြည်လို့ ရပါတယ်။
ပြီးတော့ ပြောင်းလဲလိုက်မယ်ဆိုရင်တောင် အကျင့်ပျက်၊ လာဘ်စားထား တာတွေ မရှိတော့ ဗူးပေါ်သလို ပေါ်လာလို့ အိမ်ပေါ်က ဆင်းပေးရ မယ့် ပြဿနာကိုလည်း ကြောက်စရာ မလိုပါဘူး။
ဒီတော့ ဦးသိန်းစိန်ဟာ “Nothing to lose” ပါပဲ။ ကျန်တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေ က “Something to lose or too much to lose” ဖြစ်နေတာပါ။
ဘယ်လိုပဲဆိုဆို သူ့လက်ထဲ ကြောက်စီဓား အရောက်ခံတဲ့ (ရောက်အောင် ကြံဆောင်ခဲ့တဲ့) ပေါင်ချိန်ကို (တချို့က ဒါတွေဟာ မျက်နှာမည်း ပေါင်ချိန်ရဲ့ မဟာဗျူဟာလို့ ဆိုကြတယ်။ ဘယ်လိုပဲဆိုဆို ကျနော့သဘောကတော့ ဒီ ကိစ္စမှာ ပေါင်ချိန်ကို တစ်မှတ်မှ မပေးနိုင်ပါဘူး။ ဆက်စပ်နေလို့ ပေါင်ချိန်ဆို တာ သုံးလိုက်ရပေမဲ့ နာမည်ကိုတော့ နှမြောပါတယ်။ ဒီပေါင်ချိန်ရဲ့သဘော ထားက ငါရှိနေသရွေ့ ငါလုပ်ချင်ရာ လုပ်မယ်။ ငါမရှိတော့ရင်တော့ ဘယ်ကောင့်ကိုမှ ငါလုပ်ခဲ့သလို လုပ်ခွင့် မပေးနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့ သဘော တရားထက် နည်းနည်းမှ မပိုပါဘူး။ မှတ်ချက်ရှည်သွားရင် ခွင့်လွှတ်ပါ) ကျေးဇူးတင်မယ်ဆို ကြံဖန်တင်လို့တော့ ရပါလိမ့်မယ်။
နောက်ရှု့ထောင့်တစ်ခုက ဝင်ကြည့်ရင် ဒီကျောက်စီဓား လက်ထဲရောက်ဖို့ ဦးသိန်းစိန်ကိုယ်တိုင် စနစ်တကျ၊ အချိန်ယူ ပြင်ဆင်ခဲ့တယ် လို့လဲ မြင်နိုင် ပါတယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ အရည်အသွေးက ပိုတောက်ပလာ တယ်။ ဒီလူဟာ အကြံနဲ့လူ။
ဒါကြောင့် ဦးသိန်းစိန်ကို ရလိုက်တဲ့နိုင်ငံဟာ ကံကောင်းတယ်လို့ လတ်တလော မြင်မိတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ။
၁။ စစ်တပ်မပါဘဲ ဒီနိုင်ငံကို ဘယ်သူမှ ပြောင်းလဲလို့ မရဘူး။
၂။ စစ်တပ်ထဲမှာ ဗိုလ်သိန်းစိန်၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသိန်းစိန် … ဘယ်နှစ်စိန် ရှိသလဲ။ သိပ် မရှိနိုင်ဘူး။
ဒီမှာ လူအများစု သိပ်မကြိုက်လောက်တဲ့ နှိုင်းယှည်မှုတစ်ခု ကျနော် ထုတ်ပြ ချင်ပါတယ်။
ဒေါ်စုရဲ့သတ္တိနဲ့ အရဲစွန့်မှု၊ အနင့်နာခံမှုတွေကို ပြည်တွင်းပြည်ပက တအံ့ တဩ အောချယူကြရ၊ လက်ခုပ်တဖြောင်းဖြောင်း တီးပေးကြရတယ်။ ကြက် သီးမွှေးညှင်း ထရလောက်တဲ့ သတ္တိပါပဲ။ လက်နက်ကိုင် စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေ က တစ်ဖက်၊ လက်မောင်းပိန်ပိန် ခန္ဓာကိုယ် သွယ်သွယ် အမျိုးသမီးကြီး (The Lady) က တစ်ဖက်။ ဘယ်သူမှ မငြင်းရဲတဲ့ သတ္တိ။ လက်ခုပ်သံ အား လုံးနဲ့ ထိုက်တန်တယ်။
အကျင့်တွေ ပျက်ချင်သလို ပျက်၊ အကျင့်ပျက်လို့လည်း ဘယ်သူကမှ ဘာမှ မပြောရဲ၊ ငါ့စကားနွားရ၊ လက်ညှိုးညွှန်ရာ ရေဖြစ်နေတဲ့ စစ်တပ်မင်းမူ တဲ့ေ ခတ်မှာ ကိုယ်ကျင့်တရားကို ထိမ်းမက်ထားရတာကရော လွယ်တယ်လို့ ထင် ပါသလား။
တစ်ဖွဲ့လုံး အရက်သောက်နေတဲ့အထဲမှာ တစ်ယောက်က မသောက်ဘဲ ငူငူကြီး ထိုင်နေရတဲ့ ဘဝမျိုးပါပဲ။ ဒါကို မိုးခါးရေလို့ ခေါ်မလား မသိဘူး ။ သေချာပါတယ်။ လုံးဝ မလွယ်ကူလှပါဘူး။ လက်လှမ်းမီသရွေ့ ဖတ်ရ၊ သိရတာကတော့ သူဟာ ကိုယ်ကျင့်တရား ဖောက်ပြန်မှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ သူ့ ကို မကြိုက်တဲ့လူကတောင် အပြစ်ထောက်ပြဖို့ ခပ်ခက်ခက် သဘောမျိုးပါ။
ဒီကိုယ်ကျင့်တရားကို ကျနော်က အမှတ်တွေ ပေးနေမိတယ်။
နိုင်ငံရဲ့ အပြောင်းအလဲဟာ သူစောင့်ထိမ်းခဲ့တဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားနဲ့ လုံးဝ ဆက်စပ်နေတယ်။
စစ်တပ်ထဲမှာ ဒီစာရိတ္တမျိုးနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မပေါ်လာရင် ဒေါ်စု ကိုယ်တိုင် လည်း ပါလီမန်စားပွဲထက် (၅၄) လမ်း နေအိမ်က ဒီမီယံ ရိုက်စ်တို့ ပို့လိုက်တဲ့ ပီယာနိုဘေးမှာပဲ အချိန်တွေ ထပ်စောင့်နေရဦးမယ့် သဘောပါ။
ကျောက်စီဓား လက်ထဲရောက်ဖို့ ဒီသမ္မတ ဘယ်လောက် ကြိုးစားခဲ့ရသ လဲ ။ ကျောက်စီဓား လိုချင်တဲ့ အကြံနဲ့ ဒီလောက် ကြိုးစားလာတာ မဟုတ်ဘူး ဆိုရင်တောင် သူ့လက်ထဲ ကျောက်စီဓား ရောက်သွားတာကတော့ သူ့ အတိတ်၊ သူ့ကိုယ်ကျင့်တရားနဲ့ သူရှောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ မိုးခါးရေပါပဲ။
အမြင်မတူရင် ခွင့်လွှတ်ပါ။ ကျနော်ကတော့ ဦးသိန်းစိန်ကို ကျောက်စီဓားနဲ့ အမိန့်ပေးနေမယ့် ကျန်ကျောင်းလို့ မြင်နေမိတယ်။
စလုံးက ခေါင်းလောင်းကြီးတောင် ဆယ်ပေးမယ်ဆိုလား
in ဇင်ဝေသော်, မောနင်း ပို့စ် - on 4/22/2013 - No comments
ဘယ်ကထွက်လာတဲ့ ကောလဟလမှန်းလည်း မသိရဘူး။ (စလုံးသတင်းစာ မှာ မတွေ့မိဘူး ပြောတာ)
စလုံးက မြန် မာပြည်ထဲ ဈေးကွက်အခိုင်အမာရဖို့ မဖြစ် ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ ကြိုး စားနေတော့ ငြင်းလည်း မငြင်းရဲဘူး။
အော်.. အင်း.... ဟုတ်သတဲ့လား ပဲ။
၉၅ ဝန်းကျင်က လာအိုနိုင်ငံလေး တံခါးဖွင့်တော့ မြေချဲ့စရာ မရှိတော့တဲ့ စ လုံးတွေ လာအိုနိုင်ငံထဲ အလုံအရင်းနဲ့ ဝင်ကြတယ်။ မြေမချဲ့ ဈေးကွက် ချဲ့ပေါ့။
လာအိုနိုင်ငံထဲမှာ စ လုံးစီးပွားရေးသမားတွေ ခြေချင်းလိမ်နေတာပဲ။
မြစ်ထဲက ခေါင်းလောင်းကြီးသာ ဆယ်ပေးရင် မြန်မာတွေ အသည်း ခိုက်လောက်တာပေါ့။
ပရောဂျက်ကြီး ရရင်တောင် တရုတ်မုန်းတီးရေး ဘေးရန်က သက်သာနိုင် တယ်။
ဒါ့ကြောင့်ပြောတာ၊ လက်လှမ်းမီသလောက် ကြည့်ရတာကတော့ ဒီခေတ်ကြီးမှာ ကောလဟလလည်း မငြင်းရဲဘူး။
in ဇင်ဝေသော်, ဘောလုံး - on 4/21/2013 - No comments
ရေနံနဲ့ မောင်းတဲ့ကားတွေ ဝှိုက်ဟာ့လိန်းမှာ ဈေးကွက်မရှိခဲ့ဘူး။ ဂရေ့သ် ဘဲလ်က အကောင်းဆုံးဆုရဖို့ တစ်ပြေးနေသူပီပီ တစ်ဂိုးကို အမေရိကန် အတွက် ချကြွေးပြီး တစ်ဂိုးကို ကိုယ်တိုင် စားသွားတယ်။
သူ့အကူအညီမပါတာက ဒီဖိုးရဲ့ အကင်းပါးပါးလွှင့်တင်လိုက်တဲ့ ဝေ့ဝဲ ကန်ချက်ပါပဲ။
စပါးရဲ ဆယ့်ငါးမိနစ်ကစားဟန်မှာ ၇၅ မိနစ်ကြာခံခဲ့တဲ့ နာစရီရဲ့ ဂိုးကလေး လည်း အရည်ပျော်သွားလေတော့ရဲ့။
ပြောစရာ မလိုတော့ဘူး။ အိုးထရက်စ်ဖို့က ဗီလာရဲ့ ကျရှုံးမှုဟာ မန်စီနီရဲ့ ဂျင်တယ်လ်မဲန်း အိပ်မက်လည်း ရိုးမြေကျပွဲပေါ့။
သရဲနီနဲ့ သရဲနီဖွားဘက်တော်တွေ အောင်သေသောက်ကြလေတော့မယ် ထင်မိ၊ မြင်မိရဲ့။
ပြောချင်တာက စပါး ၃၊ မန်စီးတီး ၁။
ရှင်းသန့်စိမ်းလဲ့ကျွန်း (၉း၂) Hard Truths.( Chap 9,Singapore Greening) လီကွမ်းယု။
in Hard Truths By Lee Kuan Yew, ဇင်ဝေသော် - on 4/21/2013 - No comments
မေး။ ။ စီးပွါးရေးတိုးတက်အောင် စဉ်းစားရ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်း သိမ်းရေး ကိုလည်း စဉ်းစားရနဲ့ ဒီ စဉ်းစားစရာနှစ်ခုကြောင့် အလုပ်မဖြစ်ခဲ့တဲ့ စီးပွါးရေးေ တွရှိခဲ့ဖူးသလား။
ဖြေ။ ။ ငါတို့ အမှားတစ်ခုက တန်ဂျွန်ပါဂါဆိပ်ကမ်းဘေးမှာ ဓာတ်ငွေ့ သန့်စင်စက်ရုံ တည်ဆောက်ခွင့်ပြုခဲ့တာပဲ။ ငါက သဘောမတူခဲ့ဘူး။ ဒါပေ မယ့် တို့မှာ အရင်းအနှီးလည်း မလုံလောက်ဘူး။ ဂျပန်ကုမ္ပဏီတစ်ခု (Maruzen Toyo Oil Company) က ဆိပ်ကမ်းဘေးမှာ နေရာပေးရင် စက် ရုံဆောက်ပေးမယ်လို့ပြောတယ်။ ဂိုကိန်ဆွီး (Goh Keng Swee) က ဒါကို လက်ခံဖို့ ငါ့ကိုတိုက်တွန်းတယ်။ ငါ့သုံးသပ်ချက်နဲ့ဆိုရင် မလုပ်ဖြစ်လောက် ဘူး။ သူပြောတာက တို့မှာ အရင်းအနှီးလိုတယ်။ ပြီးတော့ စင်ကာပူက ဂျပန်တွေကိုလည်း ကြိုဆိုတယ်ဆိုတဲ့အချက် ဂျပန်တွေကို အသိပေးထားဖို့ လိုတယ်လို့ ပြောတယ်။ ဟုတ်ပြီ၊ ဒါဆို လက်ခံရအောင်လို့ ငါပြောလိုက် တယ်။ နှစ်ပေါင်း ၃၀- စာချုပ်။ နှစ်သုံးဆယ်ပြည့်တော့မှ BP ( အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ ရေနံကုမ္ပဏီ) ကို လွဲပြောင်းပေးလိုက်တယ်။
မေး။ ။ လူတွေပြောနေကြတာက စင်ကာပူက ရေနံဓာတ်ငွေ့စက်ရုံတွေ ဟာ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်တွေ ထုတ်လွှတ်နေတော့ စင်ကာပူ အခု ကျင့် သုံးနေတဲ့ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်လျော့ချရေး ပရိုတိုကောအတွက် အဟန့်အ တားတစ်ခု ဖြစ်နေတယ်တဲ့။ စင်ကာပူဟာ လက်ရှိဓာတ်ငွေ့စက်ရုံတွေကို ရပ် ပစ်သင့်တယ်လို့ ထင်ပါသလား။
ဖြေ။ ။ စင်ကာပူရဲ့ ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုပမာဏက ကမ္ဘာ့ကာဗွန်ထုတ် လွှတ်မှုပမာဏရဲ့ ၀.၂ ရာနှုံးပဲရှိတာပါ။ ဓာတ်ငွေ့သန့်စင်စက်ရုံတွေက တို့ အတွက်မဟုတ်ဘူး။ အားလုံးထဲမှာ တို့အတွက်က ၅- ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲ ရှိတယ်။ ကျန်တာတွေက အိတ်(စ်)ပို့အတွက်ပဲ။ အထူးသဖြင့် အရှေ့အာ ရှနိုင်ငံတွေကို ပို့တာ။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီကြီးတွေက လုံခြုံရေးအ တွက် စိတ်ချရလို့ ဒီမှာလာပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြတာ။ အချောထုတ်ပြီးသားတွေ ကို ဒေသတွင်းက နိုင်ငံအားလုံးကို ဖြန့်တယ်။ မြောက်ဘက်ဆိုရင် အလာစ ကား၊ တောင်ဖက်ဆိုရင် နယူးဇီလန်တို့အထိရောက်တယ်။
ကုလသမဂ္ဂ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအစိုးရတွေရဲ့ ဆွေးနွေးပွဲမှာ ရာသီဥ တုပြောင်းလဲမှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ ငါပြောခဲ့တယ်။ ဒါတွေကိုလည်း ကြည့်ဖို့လို တယ်ဆိုတာ ထောက်ပြတာပါ။ လေထုညစ်ညမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်လို့တရုတ်ပြည်ကို ဝေဖန်အပြစ်တင်ကြတော့ တရုတ်ပြည်က ဒီစက်ရုံတွေက ထုတ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေအားလုံးကို အနောက်ချည်းပဲပို့တာ။ အနောက်ကသာ ဒီ စက် ရုံတွေကို တရုတ်ပြည်ထဲလာပြီး တည်ဆောက်ထားတာလို့ ပြန်ပြောတဲ့ အကြောင်း ငါက ပြောခဲ့တာ။
ဒါပေမယ့် တရုတ်တွေက ကျောက်မီးသွေးကို သုံးတာ။ တို့က ဓာတ်ငွေ့ကို သုံးတာ။ ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုကို တတ်နိုင်သရွေ့တော့ ငါတို့က ကာ ကွယ်တယ်။
ငါတို့ဆီမှာ ကာတာနဲ့ အခြားနိုင်ငံတွေက ဝယ်ယူထားတဲ့ ဓာတ်ငွေ့ သိုလှောင် ရုံတွေကတော့ LNG မြေအောက်လှိုဏ်ထဲမှာ ရှိတယ်။ ဒါကလည်း မလုပ်လို့ မရဘူးလေ။ မလေးရှားနဲ့ အင်ဒိုနီးရှားက ရေနံနဲ့ဓာတ်ငွေ့ ရောင်းဝယ်ရေး စာ ချုပ်ကို ဖောက်ဖျက်ချင် ဖောက်ဖျက်လာမှာ။ သူတို့က တို့ထက် ဓာတ်ငွေ့ လို တယ်။
ဒါမမဟုတ် တို့ထက်ဈေးပိုပေးတဲ့ နိုင်ငံတွေကိုလည်း ရောင်းပစ် ချင် ရောင်း ပစ်လိုက်မှာ။
အခုတော့ တို့မှာ အခက်တွေ့စရာ မရှိတော့ဘူး။ အခြေအနေကိုကြည့်ပြီး သဟဇာတဖြစ်အောင်တော့ နေတတ်မှရမယ်။ ကမ္ဘာမှာ ဘယ်အရာမှ တသ မတ်တည်းမရှိဘူး။
မေး။ ။ ကမ္ဘာ့ ရာသီဥတု အပြောင်းအလဲနဲ့ပတ်သက်လို့ “အူမတောင့်မှ သီလစောင့်” ဆိုတဲ့ စကားမျိုးပြောခဲ့ဖူးတယ်။ အဲဒါ ဘာကို အဓိက ရည်ရွယ် တာလဲ။
ဖြေ။ ။ ဒီပြဿနာက သြစတေးလျတောင်ပိုင်းမှာ စ ကြုံနေရပြီ။ မြောက် ပိုင်းမှာ မိုးတွေပိုများလာနေပြီ။ ဒီအတိုင်းဆက်သွားနေရင် တို့အတွက်လည်း မကောင်းဘူး။ ဒီမှာလည်း မိုးတွေပိုများလာတော့မယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါက အဆုံး သတ်ပြီး ဦးတည်ရာလည်းပြောင်းသွားနိုင်တယ်။ ဒါဆို တို့ဆီမှာ EL Nino (အယ်နီညို) တွေ ပိုများလာပြီး မိုးနည်းသွားတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပြန်ရော။ အဲဒါကမှ တကယ့်ပြဿနာ။
တို့က အနေအထားကြည့်ပြီး အဆင်ပြေအောင် ပြင်ဆင်ထားရမှာ။ စင်ကာပူ မှာ ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်သလဲဆိုတာ ဘယ်သူမှ တပ်အပ်သေချာ မပြောနိုင် ဘူး။ လတ်တလောအနေအထားအရ ဒီမှာ ပိုပြီးစိုစွတ်လာတယ်။ သြစတေး လျတောင်ပိုင်းမှာ ပိုပြီးချောက်သွေ့လာတယ်။ မြောက်ပိုင်းမှာ ပိုပြီးစိုစွတ်လာ တယ်။ ဒါကြောင့် မြောက်ပိုင်းကနေ တောင်ပိုင်းကို ရေပိုက်တွေနဲ့ ရေပြန်ပို့ပေးနေရတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့မှာက ကျောက်မီးသွေး၊ ဓာတ်ငွေ့၊ ယူရေနီယံ သယံဇာတတွေက အလျံပယ်ရှိနေတာ။ ပြီးတော့ ရေကိုလည်း ပြန်လည်သန့်စင်ယူပြီး ပြန်သုံးလို့ရအောင် တို့လိုပဲ လုပ်နေကြတယ်။
(စင်ကာပူက သူတို့လို သယံဇာတမရှိတော့ တချို့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်သိမ်းရေး နဲ့ဆိုင်တဲ့ ဥပဒေတွေကို မလိုက်နာနိုင်ဘူး)
မေး။ ။ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်သိမ်းရေးကို အကြီးအကျယ် ဆော်သြနေတဲ့ အယ်လဂိုး (AL Gore) လို ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ စည်းရုံးရေးကို နားထောင်လိုက်မိ တာမျိုး ရှိသလား။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးတော့ လိုကို လိုအပ်နေပြီ ဆိုတဲ့ သက်သေသာဓက တစ်ခုခုများ တွေ့မိလို့လား။
ဖြေ။ ။ ငါ့သဘောအတိုင်း ပြောရရင်တော့ တစ်ချို့ဆို အမှန်တကယ် လိုအပ်နေပေမယ့် ရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲတွေရှုံးမှာဆိုရိမ်တော့ အစိုးရတွေက မလိုက်နာနိုင်ကြပါဘူး။ ပြောင်းလဲလာတဲ့ ကမ္ဘာ့ရာသီဥတုနဲ့အညီ အဆင်ြေ ပအောင် နေနိုင်ဖို့ပဲ ကြိုးစားကြရမှာပါ။
ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုကို လျော့ချဖို့ အမေရိကန်တွေက ကျောက်မီးသွေး သုံးတာရပ်ဖို့ တရုတ်ကိုအဆိုပြုတယ်။ ဒီတော့ တရုတ်က ပြန်ပြောတယ်။ “ဒီနှစ်တွေအတွင်းမှာ တကယ်တန်း ညစ်ညူးစေတာက ခင်ဗျားတို့” တဲ့ ။
အခု တရုတ်နဲ့ အိန္ဒိယက ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုလျော့ချဖို့ အမေရိကန်တွေ ဆီက တောင်းဆိုဖို့ ညှိနှိုင်းကြတယ်။ ၁၉၉၀- ခုနှစ်ကရှိခဲ့တဲ့ ၄၀ ရာခိုင်နှုံးအ ထိ လျော့ချဖို့ပေါ့။ ဒါပေမယ့် အမေရိကန်ကွန်ဂရက်က လေးရာနှုံးပဲလျော့ချဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်မဟုတ်လား။ ဒီတော့ တရုတ်ကလည်း သူတို့တောင်း ဆိုတာအတွက် တုန်လှုပ်နေမှာ မဟုတ်ဘူး။ ကမ္ဘာမြေပူနွေးလာမှုရဲ့ အဓိက တရားခံက တရုတ်မှမဟုတ်ပဲ၊ အမေရိကပဲ ဥစ္စာ။
အကောင့်တင့်တွေ ဖတ်ဖို့ (တနင်္ဂနွေ အပျင်းပြေ )
in ဇင်ဝေသော်, တနင်္ဂနွေ အပျင်းပြေ - on 4/21/2013 - No comments
စာရင်းစစ်သုံးယောက်ဟာ စာရင်းစစ် ခဏနား မြားပစ်လေ့ကျ့င်ကွင်းထဲ သွားပြီး အပမ်းဖြေ မြားပစ်လေ့ကျင့်ကြတယ်။
ပထမလူ ပစ်လိုက်တဲ့မြားက စက်ဝိုင်းရဲ့ ညာဖက် စင်တီမီတာ သုံးဆယ် အကွာမှာ သွားစိုက်နေတယ်။
ဒုတိယလူ ပစ်လိုက်တေ့ာ မြားက စက်ဝိုင်းရဲ့ ဘယ်ဖက် စင်တီမီတာ သုံး ဆယ်အကွာမှာ သွားစိုက်န်ပြန်ရော။
တတိယလူအလှည့်ရောက်တော့ သူက မြားကိုပစ်တောင်မနေတော့ ဘဲ ဘေးချပြီး
"အထက်ကမြားနှစ်စင်းရဲ့ ညီမျှခြင်းအဖြေကို ထွက်ချက်လိုက်တော့ တတိယလူက ပစ်မှတ်ကို တိတိကျကျထိတယ်လို့ အဖြေထွက်တယ်" သူ့စာရင်းစာအုပ်စစ်စာအုပ်ထဲ အဲလို ကောက်ရေးလိုက်တယ်။
အော်.. အင်း.... ဘယ်လိုထပ်ပြောရမလဲ???
in ဇင်ဝေသော်, ဘာမှန်းမသိ - on 4/20/2013 - No comments
"The good will always outnumber the evil."
မှန်ပါတယ် မစ္စတာဘလော့ဂါရယ်။ ဒါပေမဲ့ တော်တော်တော့ လုပ်ယူရလိမ့် မယ်။
ဘော်စတွန် ဗုးခွဲမှုအတွက် သံသယရှိရသူ ညီအကို နှစ်ယောက်အကြောင်း ဖတ်ရတော့ အကြမ်းဖက်သမားတွေဟာ ကင်ဆာဆဲလ်တွေနဲ့ အတူတူပဲ ဆို တဲ့ ဆရာဝန်တစ်ယောက်စကားကို ထပ်သတိရမိတယ်။
လူရိုး၊ လူအေး၊ လူတော်တွေပဲ။ မထင်ရက်စရာတွေ။ ဒါပေမဲ့ ထိမ်းမရ၊ သိမ်း မရဖြစ်ပြီး ကင်ဆာဆဲလ်တွေလို အဖျက်သဘောတွေ ဆောင်လာတာ။
ပြည်တွင်းအရေးက ရှိနေပြန်တော့ ပြောရမှာက အားနာစရာ။ အင်း.... သူတို့လည်း မွတ်စလင်တွေပဲ၊ မွတ်စလင်အများစုနေတဲ့ ချေချင်းညှာ အောရီဂျင်နယ်တွေ။
အမေရိကရဲ့ နည်းပညာကလည်း ကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင် အကွက်စေ့နေတော့ ပြေးနေလည်း မိတော့မိမှာပါ။ အသေမိ၊ အရှင်မိပဲ ကွာမယ်။
အရှင်မိရင်တော့ နောက်ဆက်တွှဲဇာတ်လမ်းတွေ သိရဦးမယ်။ တွင်း တာဝါကို ဝင်တိုက်စဉ်ကတော့
" လေယာဉ်ပျံ တွင်း တာဝါဆီသွားဖို့ မြေပြင်က တက်လိုက်တာနဲ့ အလ္လာ အရှင်မြတ်ဆီကို ခရီးစနေပြီ။ တွင်း တာဝါနဲ့ နီးလာလေလေ အလ္လာ အရှင်မြတ်နဲ့ နီးလာလေလေ။ တွင်း တာဝါကို ဝင်တိုက်လိုက်ပြီဆိုရင် ဟို ဖက်မှာ အလ္လာအရှင်မြတ် စောင့်နေတယ်" တဲ့။
ဘာသာရေး အစွန်းရောက်တွေ အလ္လာအရှင်မြတ်နဲ့တွေ့ဖို့ ပေးလိုက်ရတဲ့ အသက်တွေက မနည်းလှဘူး။
ဒါပေမဲ့ မစ္စတာဘလော့ဂါရဲ့ စကားကို လက်ခံယုံကြည်ပါတယ်။
Labels: ဇင်ဝေသော်, ဘာမှန်းမသိ
in ဇင်ဝေသော်, ပြုံးစိစိ - on 4/19/2013 - No comments
သမ္မတ အိုဗားမားက "map the human brain" လူသားဦးနှောက် မြေပုံကို သုတေသနပြုဖို့ US$100 million သိပ္ပံပညာရှင်တွေကို ထုတ်ပေးတယ် တဲ့။
ဂူးဂဲလ်သွားပြီး Google Map directions ကိုကြည့်လိုက်ရင် တစ်ပြားမှ မကုန်ဘူး။
၁ ။ ဘယ်ဖက်နားရွက်ဆီကိုသွား၊ ပြီးရင် ညာဖက်ကိုကွေ့။
၂ ။ ညာဖက်ကွေ့ပြီး အထဲကို "တစ်" စင်တီမီတာ လိုက်ဝင်၊
၃ ။ အဲဒီမှာ ဦးနှောက်။ ။
အသက် ၂၈ နှစ်အရွယ်ရှိ ဆာဘ်လူမျိုး အမျိုးသမီးမှာ ထူးခြားတဲ့ ပြောင်းပြန် (upside down) ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံ ရှိနေတယ်။
စာတွေရော ပုံတွေပါ ပြောင်းပြန်ကြည့်မှ အတည့်မြင်ရတယ် လို့ UK Sun သတင်းစာက ဖော်ပြတယ်။
အင်း.. တချို့ချို့ကျတော့လည်း up ရော down ရော အတူတူ ဖြစ်နေတတ် တယ်။ မယုံရင် အောက်က ကြော်ငြာနှစ်ခုကို ကြည့်ပါ။
1) “Market going up, best time to buy.
2) “Market going down, best time to buy.”
ဘာမှ မထူးဘူး မဟုတ်လား။ up ရော down ရော best time to buy ပဲ။ ဟဲ ဟဲ။
အော်.. အင်း.... ဘယ်လိုပြောရမလဲ???
in ဇင်ဝေသော်, ဘာသာပြန် - on 4/19/2013 - No comments
မြန်မာ ဂျာနယ်လစ်ဇ်ဖြစ်တဲ့ ဆွေမင်းရဲ့ နယူးယောက် တိုင်းမှာပါတဲ့ ဆောင်း ပါးကို စထရိတ်တိုင်းမှာ ထပ်ဖော်ပြထားတယ်။ "When monks lose their way" ဘုန်းကြီးများ လမ်းကြောင်း လွဲလေသောအခါ တဲ့။
သူ့ကိုယ်သူပြည်ပြေးကျောင်းသားအမည်ခံ၊ ဟောင်ကောင်တက္ကသိုလ်မှာ ဂျာ နယ်လစ်ဇင် သင်ယူခဲ့ကြောင်း မိတ်ဆက်။
ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတဲ့ စစ်တပ်က ဘာလို့ လူထုကို ဒီလောက်ရက်စက်တာလဲဆို တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် အမေးကို အမည်ခံသက်သက်မို့လို့ ဖြေခဲ့ ရကြောင်း ပြောပြ ခဲ့။
လတ်တလော ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ မွတ်စလင်ပဋိပက္ခမှာ အဲသလို ဖြေလို့ မရတော့ကြောင့်း ရှင်းပြ။ မြန်မာတွေက အကြမ်းဖက်သူတွေဟာ ဘုန်းကြီး အတု လို့ ဆိုကြကြောင်း တင်ပြ။
ရှေးက သာသနာ့ဘောင်ထဲ ဝင်တယ်ဆိုတာ သူတော်ကောင်းအကျင့်ကို ကျင့် လိုလို့။ ယခု ရာစုဝက်လောက်အတွင်း စစ်အစိုးရလက်ထက်မှာ ဆင်းရဲ မွဲတေ၊ မှီခိုရာမရှိလို့ သာသနာ့ဘောင်ထဲရောက်လာပုံ ရှင်းပြ။
မြန်မာသံဃာတွေဟာ စစ်တပ်နဲ့ သိပ်မကွာလှ၊ တချို့ဆရာတော်တွေက စစ် တပ်အရာရှိတွေလိုပဲ ရက်စက် ကြမ်းကြုတ်ကြောင်း ရှင်းပြ။
သူကိုယ်တိုင် ဗုဒ္ဓဘာသာမိသားစုက မွေဖွားခဲ့၊ ငါးတန်းအောင်ပြီး သည်မှ စ နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက်တွေမှာ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေမှာပဲ အချိန်ကုန်ခဲ့။
ဘုန်းကြီးတွေက လာဘ်လာဘပေါများဖို့ ဗေဒင်ယတြာ လိုက်စား၊ ဒီနေ့ ဘုန်းကြီးတွေမှာ ဟန်းဖုန်း၊ ဇ်ိမ်ခံကား၊ LCD တီဗွီ များရှိ၊ တချို့ဆို လောင်း ကစားပင် လုပ်ကြ။
တွေ့ရတဲ့ ဘုန်းကြီးတွေက ဘုရားအဆုံးအမကို အလေးမထား၊ အခြား ဘာ သာယုံကြည်မှုကို တန်ဖိုးမထားကြောင်း ရှင်းပြ။
ဒီလို အားလုံးကိုဝါးလုံးရှည်နဲ့ ရမ်းပြီးရေးတဲ့ဆောင်းပါးမျိုး ကမ္ဘာ့ သတင်းစာ ကြီးပေါ်မှာ သူရေးသင့် မသင့် စဉ်းစားမိချိန်မှာ.......
ဒီဆောင်းပါးကို အင်္ဂလိပ်လို လက်လှမ်းမမီတဲ့ ပရိသတ်ကို ပြန်ချ ပြသင့် မပြ သင့်ကိုပင် ကိုယ်တိုင် ဝေခွဲချိန် မရလိုက်မိ။
Ref: "When monks lose their way" S.T. Apr,19, 2012
in စာတိုပေစ, ဇင်ဝေသော် - on 4/18/2013 - No comments
မနှစ်က ထူးထူးဆန်းဆန်း သတင်းတစ်ပုဒ်ဖတ်ရတယ်။ ဆော်ဒီအာရေး ဗျ နိုင်ငံ ရုပ်ရှင်ရုံထဲမှာ ဒိုင်နိုဆောကားပြနေရင်း THE HAYAA ခေါ်တဲ့ ဘာ သာရေးဆိုင်ရာ ရဲတွေက ရုပ်ရှင်ကို ချက်ချင်းအရပ်ခိုင်းပြီး ကလေးတွေအား လုံး အပြင်ထွက်ခိုင်းတယ်လို့ Economist သတင်းစာက ဖော်ပြထားတယ်။ အကြောင်းက ( သူတို့က မပြောဘူး၊ အပြင်မှာ ပြန့်နေတာက)
၁ ။ အမျိုးမတော်တဲ့ ဒိုင်နိုဆော အဖိုနဲ့အမ အတူထွက်လာလို့ ( ကလေးတွေ မမြင်အပ်လို့)
၂ ။ ဒိုင်နိုဆောအမဘေးမှာ အမျိုးတော်စပ်တဲ့ အစောင့်အရှောက် ဒိုင်နိုဆော အဖိုမပါလို့
၃ ။ ဒိုင်နိုဆော အဖိုရောအမပါ ဂျီဟပ် (hijabs) တွေ မပါလို့ တဲ့။
လွန်တယ်မထင်ပါနဲ့။ ဒီနေ့ စထရိတ်တိုင်းမှာ ပါလာပြန်တယ်။ ဆော်ဒီ အာေ ရးဗျမှာပဲ ကျင်းပတဲ့ ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုပွဲတော် (Jenadrivah Heritage and Cultural Festival) ကိုတက်ရောက်လာတဲ့ အမျိုးသား သုံးဦး ကို အဲဒီ THE HAYAA ခေါ်တဲ့ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ရဲတွေကပဲ ပြည်ဝင်ခွင့်မပြုဘဲ အ ဘူဒါဘီကို ပြန်လွှတ်တယ်လို့ အာရပ်ဘာသာနဲ့ Elaph သတင်းစာ က ဖော်ပြ ထားပြန်တယ်။
ဒီပွဲကို အမည်မသိ အမျိုးသမီးအနုပညာရှင်တစ်ယောက်ပါ တက်ရောက်မယ့် သဘောရှိနေတော့ အဲဒီ လူချောငနဲသုံးယောက်ကြောင့် အမည်မသိ အမျိုး သမီးအနုပညာရှင် စိတ်ကစားတာတွေ ဖြစ်မှာ စိုးရိမ်ရလို့တဲ့။
ကဲ....... အဲဒါ အာရပ်ကမ္ဘာ။
ရှင်းသန့်စိမ်းလဲ့ကျွန်း (၉း၁)
in Hard Truths By Lee Kuan Yew, ဇင်ဝေသော် - on 4/18/2013 - No comments
Hard Truths.( Chap 9,Singapore Greening) လီကွမ်းယု။
ဒီအခန်းမှာ စင်္ကာပူရဲ့ မြို့ပြတည်ဆောက်မှု ခေတ်ဦး၊ စက်မှုစီးပွားရေး ခေတ် ဦး ကောက်ကြောင်းတချို့ကို သိနိုင်သလို "ငါနဲ့ သက်တောင့်သက်သာရှိတဲ့ အဝတ်အစားကို (ဟောင်းနွမ်းနေပေမယ့် ) ဘာလို့ လွှင့်ပစ်ရမှာလဲ၊ ဘယ်သူ အထင်ကြီးအောင်မှ ဝတ်ကောင်းစားလှ ဝတ်ပြနေစရာ မလိုပါဘူး" ဆိုတဲ့ စကားတွေဟာ ခေါင်းစုတ်ဖွား၊ အဝတ်အစားဖရိုဖရဲနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ ဓာတ်ပုံ တ ချို့ကို အမှတ်ရစေမှာ အမှန်ပါ။ ကျန်တာတွေ နောက်ထား ဒီအချက်ကတော့ သူတို့ ကွက်တိတူကြတယ်။
မေး။ ။ အစောပိုင်းနှစ်တွေကတည်းက စင်ကာပူရဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် သန့် ရှင်းရမယ်။ စိမ်းလန်းရမယ်လို့ မစ္စတာလီကြွေးကြော်ခဲ့တယ်နော်။ဘာကြောင့် များ ဒီလိုကြွေးကြော်ရတာလဲ။
ဖြေ။ ။ တို့မြို့က ကျွန်းသေးသေးလေးပေါ်ကမြို့လေ။ ရွေးကောက် တင်မြှောက်ခံရတဲ့ အစိုးရတွေဟာ တစ်ချို့နေရာတွေကို သန့်ရှင်းအောင် လုပ်မပေးနိုင်ခဲ့ဘူး။ အင်္ဂလိပ်အစိုးရ လက်ထက်ကတည်းက တစ်ချို့နေ
ရာတွေကို လစ်လျူရှုထားခဲ့တာ။ ပြန့်ကျဲနေတဲ့တဲပေါက်စတွေ၊ မလေးရွာတွေ ၊ ရေမြောင်းမရှိ၊ မြေအောက်ရေပိုက်လိုင်းတွေမရှိ၊ အိမ်သာမရှိ၊ ရေတွေက လည်း လျှံနေတာပဲ။ ဟိုတုန်းက ယုံကြည်ခဲ့သလို အခုလည်းယုံကြည်တယ်။ တစ်ကယ်လို့ တစ်ကျွန်းလုံးအနေနဲ့ သန့်ရှင်းစိမ်းလန်းအောင် လုပ်မပေးနိုင် ဘူးဆိုရင် စင်ကာပူမှာ လူတန်းစားနှစ်ရပ် ကွဲနေလိမ့်မယ်။ အထက်တန်းလွှာကလူတွေ၊ လူလတ်တန်းစားတွေနဲ့ လူလတ်တန်းစားထဲက အဆင့်မြင့်အလွှာကလူတွေက တစ်မျိုး၊ အောက်ခြေအလုပ်သမား လူတန်း စားတွေက တစ်မျိုးဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ အထက်တန်းလွှာက အထက်တန်းစား ပတ်ဝန်းကျင်မှာနေပြီး အောက်တန်းလွှာက ချို့ချို့တဲ့တဲ့၊ ညစ်ညစ် ပတ် ပတ်နေကြရမယ်။
အဲသလိုမြို့တွေဟာ စိတ်လှုပ်ရှားစရာမကောင်းဘူး။ တို့မှာ စစ်မှုထမ်းတာဝန် က မထမ်းမနေရ။ သူတို့ရဲ့ ကလေးတွေ အိမ်ကောင်းကောင်းနဲ့နေတဲ့ သူဌေးေ တွကို ကာကွယ်ရင်း အသက်ပေးဖို့ ဘယ်သူမှ ဆန္ဒမရှိဘူး။ ဒီတော့ တစ် ကျွန်းလုံးကို သန့်နေရမယ်။ စိမ်းနေရမယ်။ လူတိုင်းအိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု ရှိနေရမယ်။ အဲဒါ အရင်ဆုံး ငါရေးဆွဲခဲ့တဲ့ အခြေခံကောက်ချက်နဲ့ မူဝါဒပဲ။ အဲဒါ အလုပ်ဖြ စ်သွားတယ်။
ဒီကိစ္စက အရေးတကြီးလုပ်ဆောင်ရမယ့် စာရင်းထဲမှာပါတယ်။ ဘဏ္ဍာရေးနဲ့ ကာကွယ်ရေးကလွဲရင် ဒီကိစ္စက အရေးအကြီးဆုံးပဲ။ ငါတို့ လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ တစ်ညီတစ်ညွတ်တည်းဆိုတဲ့ ခံစားမှုမျိုးရှိနေရမယ်။ တစ်ကျွန်းလုံး ဒီလို သန့် ရှင်းစိမ်းလန်း အောင် လုပ်မပေးပဲနဲ့ ဒီလိုခံစားမှုက မရနိုင်ဘူး။ ဒီနေ့ဆိုရင် မင်းက နှစ်ခန်း၊ သုံးခန်း၊ လေးခန်း ဒါမှမဟုတ် ငါးခန်း HDB မှာနေ တာ ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကွန်ဒိုမှာနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မြေစိုက်အိမ်တွေမှာ နေတာပဲဖြစ်ဖြစ် အားလုံးဟာသန့်ရှင်းနေတာပဲ။ အားလုံးတန်းတူ မဟုတ်စေဦးတော့ ပြည်သူ ပိုင်နေရာတွေမှာ အားလုံးဟာ ညီတူအခွင့်အရေးရကြတယ်။
မေး။ ။ အဲဒီအချိန်တုန်းက စင်ကာပူက စက်မှုနိုင်ငံအဖြစ် အားထုတ်နေ ရတုန်းပဲ။ တစ်ချို့စက်ရုံတွေက လေထုကိုညစ်ညူးစေတယ် မဟုတ်လား။ ဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးအကြား ဟန်ချက်ညီအောင် ဘယ်လို ထိန်းသိမ်းခဲ့ရသလဲ။ ပတ်ဝန်းကျင် လေထုညစ်ညမ်းမှာကို စိုးရိမ်ရတဲ့အတွက် တချို့ပရောဂျက်တွေ နှေးကွေးခဲ့တာတွေ ကြုံခဲ့ရသလား။
ဖြေ။ ။ တတ်နိုင်သ၍ လေထုညစ်ညမ်းမှုမဖြစ်အောင်တော့ စဉ်းစားကြ ပါတယ်။ ဂျူရောင်းမှာ ရေနံဓာတ်ငွေ့ သန့်စင်စက်ရုံရယ်၊ ရေနံဓာတ်ငွေ့စက်ရုံ ရယ် စတင်တည်ဆောက်ခဲ့ကြတယ်။ ဆူမီတိုမိုကုမ္ပဏီနဲ့ပေါ့(Sumitomo)။ သူတို့က ဂျပန်စတန်းဒတ်ကို သုံးချင်တာ။ အဲဒီမှာ အကြီးအကျယ် အငြင်းပွါး ခဲ့ရတယ်။ ငါတို့က ဂျာမဏီစတန်းဒတ် သုံးစေချင်တာ။ ဂျာမဏီစတန်းဒတ်က ဥရောပမှာ ထိပ်တန်းပဲလေ။
ထိုင်ဝမ်က Kaohsiung ဂေါက်ကွင်းထဲမှာ ဂေါက်ကစားတုန်းက ကြုံခဲ့ရဖူး တယ်။ စက်ရုံတွေက ဂေါက်ကွင်းနဲ့ တော်တော်ဝေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ရေနံဓာငွေ့စက်ရုံတွေက ထွက်လာတဲ့အနံ့တွေကို ရနေတယ်။ ဂျာမန်ပစ္စည်းကို သုံးမယ်ဆိုရင်လည်း အကုန်အကျက အများကြီး တက်သွား မှာဆိုတော့ စကားတွေအတော် ပြောခဲ့ရတယ်။ တို့ကလည်း ဂျာမန်ပစ္စည်းကို သုံးချင်သုံး၊ မသုံးရင် လက်မခံနိုင်ဘူးလို့ ခပ်ပြတ်ပြတ်ပြောရတယ်။ လေထု ညစ်ညမ်းမှုကို လျော့ချဖို့လိုအပ်တဲ့ အခြားပစ္စည်းတွေထည့်ဖို့ တို့ဖက်က အလုပ်လုပ်ခွင့် ပေးဆောင်စရာတွေတစ်ချို့ကို လျော့ချပေးမယ်လို့ ပြောရတယ်။ ပစ္စည်းဈေးကျခိုက်မှာ သူတို့လည်း ဝယ်တပ်ဆင်လိုက်တယ်။ အခု Jurong County Club ကပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Raffles County Club ကပဲဖြစ်ဖြစ် အနံ့အသက် မရတော့ဘူး။ တို့ကသာ သူတို့သဘောအတိုင်း ခွင့်ပြုခဲ့ရင် အခြေအနေတော်တော် ဆိုးသွားနိုင်တယ်။
ဂျာမန်တွေရဲ့ စတန်းဒတ်အမြင့်ဆုံးဆိုတာက သူတို့ဓာတ်ငွေ့စက်ရုံတွေက မြို့တွေအနားမှာ တည်ဆောက်ထားလိ်ု့။ အမေရိကန်တွေရဲ့ စတန်းဒတ်က အရင်က အညံ့ဆုံးပဲ။ သူတို့မှာက Houston လိုနေရာမှာ နေရာအလွတ်တွေ အကျယ်ကြီးရှိတာ။ အဲဒီနေရာအနီးအနားမှာ အိမ်တွေဘာတွေ ဆောက် လာတော့မှ သူတို့က စတန်းဒတ်ကို မြှင့်လာတာ။ တို့ကျတော့ ဒီကျွန်းလေးပဲ ရှိတယ်။ ဒီကျွန်းလေးကို ဖျက်ဆီးမိရင် ပျက်နေတဲ့ကျွန်းလေးပဲ ပိုင်ဆိုင်တော့ မှာ။
မေး။ ။ သန့်ရှင်းစိမ်းလန်းရေး အစီအစဉ်အရ နှစ်တွေအလိုက် ဘယ် လိုပြောင်းလဲရမယ်ဆိုတဲ့ အတွေးမျိုးရှိခဲ့သလား။
ဖြေ။ ။ အားလုံးပြောင်းလဲပေးနေရတယ်။ ကမ္ဘာ့အဆင့်မီနေအောင် အမြဲ တမ်းလိုက်နေရတယ်။ ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး အိုအေစစ်ဖြစ်ချင်ရင် အနေ အထားေ တွ အားလုံး ပထမတန်းစားတွေ ဖြစ်နေရမယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်မှရယ် မဟုတ် ဘူး။ သုံးစွဲတဲ့ပစ္စည်းတွေ၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအဆင့်တွေ၊ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေ၊ ဆက်သွယ်ရေး လုံခြုံရေးစတာတွေလည်း ပထမ တန်းပဲဖြစ်ရမယ်။ သူ့ခေတ်နဲ့သူကတော့ ကမ္ဘာမှာအကောင်းဆုံးအဆင့် ရှိတာတွေချည်းပဲသုံးတယ်။ ဒါဆို ကိုယ်လည်း ကမ္ဘာထဲ ဝင်ပြိုင်လို့ရသွားပြီ။
တို့ကို အသက်မဝင်တဲ့ “အမြုံ” ကျွန်းလို့ခေါ်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် လုံခြုံတယ် ။ လေထု မညစ်ညမ်းဘူး။ တို့က အခြေခံကစပြီး ကြိုးစားတာ။ အခြေခံ အချက်တွေရှိပြီဆိုတော့ အခု “Buzz” တွေဆီ သွားလို့ရပြီ။ စင်ကာပူမြစ် တစ်လျှောက်၊ မရီနာဘေးတစ်လျှောက် ညလုံးပေါက် အရက်သောက်လို့ ရပြီ။ နိုက်ကလပ် တက်မလား၊ ကာရာအိုကေ ဆိုမလား။ ကြိုက်ရာလုပ်လို့ ရပြီ။ ကာစီနိုတွေကတော့ ပြဿနာသယ်လာနိုင်စရာရှိတယ်။
ဝမ်ကန်စိန် (ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး ၁၉၉၄- ၂၀၁၀) နဲ့ ရဲဖက်အရာရှိတွေ သေေ သချာချာ တွက်ချက်ကြတယ်။ မူးယစ်ဆေးဝါး၊ ငွေဖြူငွေမဲ လဲလှယ်မှု နဲ့ ပြည့် တန် ဆာကိစ္စကို သူတို့ ထိန်းချုပ်နိုင်တယ်။ သူတို့ အာမမခံနိုင်တာ က လောင်းကစားအကျင့် စွဲသွားမှာကိုပဲလို့ ပြောကြတယ်။ ဒါကို ကာကွယ်ဖို့ အစီအစဉ်တွေ ဆွဲရတာပေါ့။
ကာစီနိုတွေမရှိဘူးဆိုရင် အသုံးအစွဲကြီးတဲ့ နိုင်ငံခြားက သူဋ္ဌေးတွေ ဒီကိုေ ရာက် လာကြမှာ မဟုတ်ဘူး။ ပြီးတော့ ဖော်မြူလာ ဝမ်း။ ၁၉၇၀ ခုနှစ်တွေ တုန်းကဆိုရင်တော့ ကားပြိုင်ပွဲတွေ လက်ခံတာ မကောင်းဘူးပေါ့။ သူတို့ကြောင့် ငါတို့လူတွေက ပိုပြီး ကားမောင်းကြမ်းလာစရာ ရှိတာကိုး။ F 1 ဘယ်လောက် တိုးတက်လာသလဲဆိုတာ ကြည့်လိုက်တော့။ ဂျက်(စက်) တပ်ဆင်တဲ့အဖွဲ့တွေ တစ်ဖွဲ့လုံးလာကြတာ။ သူတို့ကို ဘဏ်တွေက စပွန် ဆာပေးထားကြတာ။ ကားပြိုင်ပွဲမလုပ်ရင် အဲဒီအခွင့်အရေးတွေ လွတ်ကုန် မှာပဲ။
ဒါကြောင့် ငါလည်း စိတ်ပြောင်းသွားတယ်။ သူတို့အတွက် ကားလမ်း သီး သန့်တော့ ခင်းမပေးနိုင်ဘူး။ ကားလမ်းဘေးတွေမှာ အကာအရံတွေထားပြီး ဒီလမ်းတွေပေါ်မှာပဲ ပြိုင်မယ်လို့ ပြောခဲ့တယ်။ မိုနာကိုမှာလည်း အဲသလိုပဲ ပြိုင်တာ အောင်မြင်တယ်။
in စာတိုပေစ, ဇင်ဝေသော် - on 4/17/2013 - No comments
တစ်ခုခု ကမ္ဘာကျော်ဖို့ ကဘောက်တိ ကဘောက်ချာလေးတွေလည်း ရှိနေမှ ရပါတယ်။ မယုံရင် ကမ္ဘာသုံး အင်္ဂလိပ် စကားကို ကြည့်ပါ။
ဗျည်းမပါဘဲ ဗျည်းသံထွက်နေတာ တချို့ကို အရင်ကြည့်ပါ။
1) A is for Eh?
2) C is for See.
3) G is for Jeep.
4) I is for Eye.
5) K is for Cayman.
6) L is for Elephant.
7) M is for Eminent.
8) N is for Enlist.
9) Q is for Cue.
10) R is for Ah.
11) S is for Esteem, and
12) U is for You.
ဒါပြီးရင် ဒါလေးတွေကို ဆက်ကြည့်ပါ။
A is for aisle;
B is for bdellium;
C is for czar;
D is for djinn;
E is for Euphrates;
G is for gnome;
H is for hour;
K is for knee;
M is for mnemonic;
O is for Ouija;
P is for pneumonia; and, most appropriate of all,
ဒါကို သဘောတူရင် ဟား ဟားလို့ ရယ်လိုက်ပါ။ အင်္ဂလိပ်လို စာလုံးပေါင်းရင်တော့
Mwah ha ha ha ha ဒါမှမဟုတ်
Kha ha ha ha ha ဒါမှမဟုတ်
Mha ha ha ha ha လို့ ပေါင်းပေးပါ။ မမှားပါ။
in ကဗျာ, ဇင်ဝေသော် - on 4/17/2013 - 1 comment
မဖတ်ရသေးသူတွေ ဖတ်ဖို့နဲ့ နှစ်ဆန်းတစ်ရက် အမှတ်တရအဖြစ် ကဗျာဟောင်းကိုပဲ ပြန်ခေါ်လိုက်မိပါတယ်။
~~ မင်္ဂလာ နှစ်သစ်ကူးပါ ~~
ငါးပါးသီလ လုံတဲ့ ရေ၊မြေ၊လေ၊မီး
ဓာတ်ကြီးလေးပါး ဗြဟ္မစိုရ်လေးပါး ပွားစေ။
စီးပွားရေး ပိုလီယို မာရသွန်ပြိုင်စေ
အမြဲဝါလယ်ခင်းတို့ ကမ္ဘာ့ (နာမ်) ရိက္ခာဖြစ်စေ။
ကလေးတို့ သင်တဲ့ပညာ ဂလိုဘယ်ဆန်စေ
ချို့တဲ့သော ပညာရှင်များ ဗိုက်ဝစေ
ယာတောထဲ ဟစ် ဟော့ဖြစ်စေ။
နိုင်ငံ ခေါင်းဆောင်များ ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်ပါစေ
တစ်နှစ်မှာ ၁၂ လ
ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်မှာလည်း ၁၂ ကန့်
(ပန်းချီပုံကို ဤနေရာမှ ကူးယူပါသည်။)
( First published on 17 Apr 2012 )
အမျိုးသား ဖြစ်ရခြင်းရဲ့ အားနည်းချက် ၅ ချက်
in ပြုံးစိစိ - on 4/16/2013 - No comments
၁ ။ အမျိုးသားများ အမျိုးသမီးအိမ်သာထဲ မှားဝင်ရင် ထောင်ဒဏ် ၂ နှစ်။
၂ ။ သေရေးရှင်ရေးကိစ္စတွေ ကြုံလာတိုင်း “women and children first”.
၃ ။ အဝတ်အစားအရောင် ခပ်မှိန်မှိန်ပဲ ဝတ်လို့ရ။ တောက်တောက်ပပတွေ ဝတ်လွန်းရင် ဂေး လို့ထင်တတ်ကြ။
၄ ။ ဝမ်းနည်းစရာ ရုပ်ရှင်တွေ၊ ဘာတွေကြည့်ရင်း မျက်ရည်ကျမိရင် မျက်ရည် ကို ခိုးသုတ်ရ။ နို့မို့ ဂေး လို့ထင်တတ်ကြ။
၅ ။ အားကစားကို လုံးဝစိတ်မဝင်စားရင်တောင် တစ်ခုခုကို စိတ်ဝင်စားနေကြ ရ။
( ဒါပဲ၊ ကျန်တာစိတ်ကြိုက် ဖြည့်လို့ရ )
ကျန်ကျောင်း၊ ကျောက်စီဓားနဲ့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် (၁)
in Politics, ဇင်ဝေသော် - on 4/16/2013 - No comments
"ဦးသိန်းစိန်ဦးဆောင်တဲ့ စစ်တပ်အစိုးရက ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို တကယ် လုပ်နေတယ်လို့ ယုံကြည်သလား"
"အမှန်တကယ် ဦးဆောင်နိုင်မယ့် အရည်အချင်းရှိတယ်လို့ ယုံကြည်သလား "
မကြာမကြာ မေးတတ်တဲ့ (အမေးခံရတဲ့) မေးခွန်းမျိုးတွေပေါ့။
၂။ စောင့်ကြည့်မှ သိကြရမှာပါ။
၁။ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို တကယ်လုပ်နေတယ်လို့ လတ်တလော ယုံကြည် လို့ ရပါတယ်။ ဒါပါပဲ။
အော်စရာ မကောင်းဘူးလား။ ။
ကိုယ့်အသံနဲ့ကိုယ် မအော်ခင် မဟေသီ မဂ္ဂဇင်းထဲက ဆရာ မိုးမြင့်အောင်ရဲ့ ကဗျာလေးကို ကိုးကားကြည့်လိုက်မိတယ်။
မျှော်တော်ယောင် စင်္ကာပူရောက် မြန်မာသမ္မတ တစ်ယောက်ရဲ့ ဝိဋဋူပ ဆန်ဆန် ဇာတ်လမ်းက စလိုက်ရမလား။ မင်းရဲ့ ညီတော်တွေ တောကစား ထွက်နေလို့ မင်းကို အရိုအသေပေးမယ့် မင်းညီမင်းသား မရှိတာပါလို့ ချွေး သိပ်တာမျိုးလား။ မင်းက အရိုအသေပေးရမယ့် မင်းရဲ့နောင်တော်တွေတော့ လာကြပါလိမ့် မယ်။ ဒီလိုလား။
"ငိုသံ ဟိုတစ်ဖက်မှာ ကြုံးဝါးသံ ဆိုတာရှိတယ် ရှိတယ်" ဆိုတဲ့ ဆရာကြီး စိုင်းခမ်းလိတ်ရဲ့စကား၊ စိုင်းထီးဆိုင်ရဲ့အသံသာ မှန်ခဲ့ရင် အကျယ်ကြီး မ ဟုတ်ပေမယ့် ကြုံးဝါးသံသဲ့သဲ့တော့ ခံစားတတ်ရင် ကြားလို့ရနိုင်တယ်။
စထရိတ်တိုင်းက ပေးတဲ့ဆုကို ကိုယ်တိုင် တက်မယူခဲ့တာ (ဘာလုပ်ဖို့လဲ)၊ စလုံး သံအမတ်က " ဒေါ်စုနဲ့တွေ့ရဖို့ကလည်း သိပ်ခက်တာပဲ " ဆိုတဲ့ ကြား ရတဲ့ စကားသာ မှန်ခဲ့ရင် မြန်မာတွေ နိုင်ငံခြား ဆက်ဆံရေးသင်ရိုးကျေ တယ်လို့ ပြောရပါလိမ့်မယ်။
ဘယ်ကစရမလဲ။ လူထုနှလုံးသားထဲရောက်ဖို့ ( လူထုအကုန်တော့ ဘယ် ဟုတ်ပါ့မလဲ၊ သိကြားမှတ်လို့ ) ဗီလိန်ကနေ ဟီရိုးဖြစ်အောင် လွှင့်ရတဲ့ လေ ဆန် ရေဆန်ခရီးက စလိုက်ရမလား။
မြန်မာတွေကပဲ အညှာလွယ်၊ သနားလွယ်၊ ပြီး ပြီးရောတွေ မို့လား။
ဦးသိန်းစိန် အရင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေထဲက ပြောင်းလဲရေးကို လိုလားတဲ့ စစ် တပ်အရာရှိတွေ မရှိခဲ့နိုင်ဘူးလား။
ဘာမှ ကောင်းတာမလုပ်ခဲ့တဲ့လူကတောင် သေခါနီးရင်တော့ သူ့ကောင်း ကွက်လေးတွေရှာကြည့်ပြီး လူထုက သူ့ကို သတိရနေတာမျိုး တောင့်တ တတ်တယ်လို့ ဆိုကြတယ် မဟုတ်လား။
ပြောင်းလဲချင်ပေမယ့် ပြောင်းလိုက်ရင် ပြန်ပေးရမှာတွေကများလွန်းတော့ သေချာအောင် လုပ်ရင်း လုပ်ရင်းနဲ့ မသေချာလိုက်ဘဲ သေကုန်ကြတာလား။
လက်လှမ်းမီသမျှလေး နှိုက်ကြည့်လိုက်ချင်လို့ပါ။ စိတ်ရှည်တတ်ရင် စောင့် ဖတ်ကြပေါ့ဗျာ။
အခုတော့ သစ္စာနီ ပြောသလို " မင်းသားက ရွှေမန်းသား အကြီးကောင်၊ ဇာတ်ကားနာမည်ကတော့ အဖေလာမှ သိမယ် " နဲ့ အလုပ်ရှိနေလို့ နား လိုက်ပါဦးမယ်။
in ဇင်ဝေသော်, တနင်္ဂနွေ အပျင်းပြေ - on 4/14/2013 - No comments
အမေရိက ( Aphorism ) စကားထာ
"ဒီနေ့ သမ္မတဆိုတာ အနာဂတ်ရဲ့ တံဆိပ်ခေါင်းပဲ"
ရုရှားက ( Aphorism ) စကားထာ
" ကျနော့်ဆန္ဒက မကြီးပါဘူ၊ သေးသေးလေးပါ။ ငွေစက္ကူပေါ်က နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ပုံကို သေးနိုင်သမျှ သေးသွားစေချင်တာပါပဲ"
မြန်မာပြည်က ( Aphorism ) စကားထာ
"သူတို့ နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေ ကံကောင်းလိုက်တာ၊ တိရစ္ဆာန်ပုံနဲ့ အစားထိုးမခံရဘူး"
နွေဦးအက်ဆေး ( တနင်္ဂနွေ အပျင်းပြေ)
in ဇင်ဝေသော်, တနင်္ဂနွေ အပျင်းပြေ, ရသ ဆင်ခြေဖုံး - on 4/14/2013 - No comments
သူများတွေအတွက် နွေဦးသည် လှပသောကာလတစ်ခု ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်ပါ လိမ့်မည်။ ကျနော့်အထင်မှာတော့ ရာသီသုံးခုအနက် နွေရာသီသည် စိတ် ပျက်စရာ အကောင်းဆုံးဟု ထင်မိပါသည်။ ထို့ကြောင့် နွေဦးကိုလည်း လုံးဝ သဘောမတွေ့ပါ။
ဥဩတွန်သံသည် လွမ်းစရာကောင်းသည်ဟု တချို့က ဆိုကြသည်။ တွန်ေ နသော ဥဩကိုလည်း အဖော်ကွာ၊ အထည်းကျန်ခြင်းဟု လူတွေက ထင်သ လို အဓိပ္ပါယ်ဖော်နေကြသည်ကိုလည်း တွေ့မြင်နေသည်။ အမှန်မှာ ဥဩက တွန်ချင်လို့ တွန်နေခြင်းသာဖြစ်ပြီး အဖော်ကွာခြင်း၊ အထည်းကျန်ခြင်းနှင့် မဆိုင်လှပါ။ ရှင်းပြပါမည်။ တစ်ခါက " ဥဩ ဥဩ " ဟု ဟိုဖက်သစ်ပင်နှင့် ဒီဖက်သစ်ပင်မှနေပြီး ပြိုင်တူအော်နေသည့် ဥဩဖိုနှင့်ဥဩမကို တွေ့ရဖူး သည်။ သူတို့သည် လွမ်းလို့အော်နေခြင်း လုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါ။ အော်ချင် လို့အော်နေခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။ ဟိုဖက်သစ်ပင်နှင့် ဒီဖက်သစ်ပင် လွမ်းနေစရာ လုံးဝအကြောင်းမရှိပါ။ ထို့ကြောင့် လူအများစု ခံစားနေရသည့် နွေဦးဂီတ ဆိုသည်ကလည်း ကျနော့အတွက် မချိုတော့ပါ။ လွမ်းစရာကောင်းသည်ဟုလည်း လုံးဝ မထင်မိတော့ပါ။ ပါးစပ်ဆော့သော ဥဩတို့၏ ပူညံပူညံ အသံသာ ဖြစ်နေပါတော့သည်။
နွေဦးရောက်ပြီဆိုသည်နှင့် ရွာလယ်လှည်းလမ်းဘေးမှာရှိသော ကျနော်တို့ အိမ်ထဲကို ဖုန်တွေ အလုံးလိုက် အလုံးလိုက်ဝင်လာတတ်သည်။ တားဆီးလို့ လုံးဝမရပါ။ ထမင်းစားပြီဆိုလျင်လည်း ထမင်းပုဂံပြားမှာသဲတရှပ်ရှပ်နဲ့ ဖြ စ်ေ န တတ်သည်။ ထမင်းတစ်ခါစားတိုင်း ဗိုက်ထဲကို သဲဘယ်လောက် ရောက် သွားမှန်းပင်မခန့်မှန်းနိုင်တော့ပါ။ ရေသောက်မလို့ ရေခွက်ကိုင်လိုက် လျင်လည်း ခွက်နှင့်လက် မထိမီ ဖုန်မှုန့်တွေနဲ့ အရင်ထိသလို ခံစားရသည်။ သန်းထွန်းလေး သီချင်းထဲက ဖုန်လုံးကြီးများသည် အပြင်မှာ စိတ်ပျက် စ ရာ တော်တော်ကောင်းပါသည်။
အဆိုဆုံးကတော့ အေးရာ ရှာနေတတ်သည့် ခွေးဝဲစားကြီးက သောက်ရေ အိုးစဉ်အောက် လာဝပ်တတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ခွေးဆိုသည့်အတိုင်း ဘာ အဝတ် အစားမှ ဝတ်မထားပါ။ သောက်ရေအိုးစဉ်အောက် ရောက်ပြီဆိုသည်နှင့် တစ် ကိုယ်လုံးက သူ့ဝဲတွေကို တဗျင်းဗျင်းကုတ်လေတော့သည်။ သူကုတ်လိုက်တိုင်း ဝဲများ၊ ခွေးသန်းများ ထွက်ထွက်လာတတ်သည်။ ထွက် လာသော ခွေးသန်းများကို တစ်ခါတစ်ခါ သူက ကိုက်စားနေတတ်ပြန်သည်။ အလွန် မနှစ်မြို့စရာကောင်းသော နွေဦးရှုခင်းဖြစ်သည်။
နွေဦးရောက်လာပြီဆိုလျင် လင်မယား ရန်ဖြစ်တာလည်း ပိုများလာသည်။ အဓိက အကြောင်းက ထန်းရေ လှိုင်လှိုင်ပေါခြင်းနဲ့ အလုပ်မရှိသဖြင့် ဖဲဝိုင်း များ ပေါလာခြင်းကြောင့်ဟု ထင်ပါသည်။ မူးလာလို့ ရန်ဖြစ်တာ၊ ဖဲရှုံးလို့ ရန်ဖြစ်တာစသဖြင့် ရန်ဖြစ်လို့သာနေကြတော့သည်။
ထိုမျှမက နွေဦးရောက်လာပြီဆိုလျင် မျက်စေ့ကျိန်းသူ၊ မျက်ခန်းစပ်သူများ လည်း အတော်ပေါပါသည်။ တချို့က သန့်သန့်ရှင်းရှင်း မနေကြသဖြင့် မျက်ချေးများပင် အလုံးလိုက် မြင်နေရတတ်သည်။ ရွံစရာ ကောင်းလှသည်။ ထို့ကြောင့် နွေရာသီကို လုံးဝ မနှစ်မြိုပါ။
တချို့က "သစ်ရွက်ရော်ရည်၊ ဣန္ဒနီဝယ်" စသဖြင့် ဖွဲ့ဆိုတတ်ကြသေးသည်။ အမှိုက်လှဲရသည့် ဒုက္ခကို လုံးဝသိဟန်မတူပါ။ ကျနောတို့ ကလေးဘဝ က နွေရာသီရောက်လျင် အကြောက်ဆုံးက တံမျက်စည်းလှဲရသောအလုပ်၊ အမှုက်ကျုံးရသော အလုပ်ဖြစ်ပါသည်။ တံမျက်စည်းလှဲတာ မပြောင် လျင် ကောင်ဘိုက နားရွက်ကို ဆွဲလိမ်သည်။ ကောင်ဘိုသည် လူမဟုတ်ပါ။ ကိုရင်ဖြစ်သည်။ ကိုရင်အောင်ဘိုဖြစ်သည်။ သို့သာ် ကျနော်တို့ ကလေးပါး စပ်မှာ မြန်မြန်ခေါ်တော့ ကိုရင်အောင်ဘိုက ကောင်ဘို ဖြစ်သွားတော့သည့်။
နွေဦးက ကြောက်စရာလည်း အလွန်ကောင်းသည်။ "လက်ပန်ဖူး ခွေးရူး၊ လက်ပန်ပွင့် ခွေးလွင့်" ဟုဆိုးစကား ရှိသည်။ ထိုစကားက တကယ်လည်း မှန်သည်။ နွေဦးရောက်လာပြီဆိုလျင် ခွေးရူးလည်း အတော်ပေါသည် ။ ခွေး ရူး၏ မျက်လုံးများက ကြည့်ရဆိုးသည်၊ ခွေးရူးအကိုက်ခံရလျင် ခွေးရူးပြန်ေ ရာဂါ ရတတ်သည်။ ထိုထက် စိတ်ညစ်စရာကောင်းသည်က ဘယ်သူ့ခွေးေ တာ့ ရူးပြီဆိုတာနှင့် လှံဆွဲ၊ ဓားဆွဲဖြင့် ထိုခွေးကို ဝိုင်းသတ်ကြတော့သည်။ မသေမရှင် သွေးသံရဲရဲဖြင့် လျှောက်ပြေးနေရသော ထိုခွေးကို ကပ်ပေါက်ထဲ က ချောင်းကြည့်ရသည်ကပင် အတော် စိတ်ပျက်စရာ ကောင်းလှပါသည်။
နွေဦးရောက်လာပြီဆိုသည်နှင့် ကန်ရေများ ခမ်းခြောက်ကာ ရေပြဿနာ လည်း တက်လေတော့သည်။ ကျနော် မကြိုက်နှစ်သက်ဆုံးအရာက နွား စားကျဉ်းထဲမှာ ရေဆင်းချိုးရခြင်းဖြစ်သည်။ ချိုးသည့်ရေ အလကားမဖြစ် ဘဲ နွားသောက်ရေ ရအောင် ရီဆိုက်ကယ်လုပ်သောသဘော ဖြစ်သည်။ မည်သို့ဖြစ်စေ နွားစားကျဉ်းထဲရေချိုးရခြင်းက ကသိကအောက် အတော်နိုင်လေသည်။ ငယ်သေးသဖြင့် မီရေး ထင်းရေးကိစ္စ ကြောက် စ ရာကောင်းပုံကိုတော့ ကျကျနနမသိပါ။
နွေနှင့်ပတ်သက်လို့ ပျော်စရာဆိုလျင် အသန့်ကြိုက်သော မသက်ချွေးဘေး မှာ ဖုန်လုံးကြီးများ အလိပ်လိုက် အလိပ်လိုက် ကျန်ရစ်အောင် ခြေထောက် ဒရွတ်ဆွဲ ပြေးခဲ့ရခြင်းတစ်ခုသာ ရှိပါသည်။ သူစိတ်ဆိုးလေလေကျနော် တို့ ပျော်လေလေဖြစ်သည်။
အားလုံးကို ခြုံကြည့်လျင် နွေဦးသည် အလွန်အရုပ်ဆိုးပြီး ကဗျာတဖွဲ့ စာတဖွဲ့ လုပ်နေစရာအကြောင်း လုံးဝမရှိပါ။
(မှတ်ချက်။ ။ ဆရာဇော်ဇော်အောင် ငယ်စဉ်က ရေးခဲ့သည့် နွေဦး စာစီ စာကုံးကို ဖော်မက်ယူပြီး ရေးထားတာ ဖြစ်ပါသည်။)
Labels: ဇင်ဝေသော်, တနင်္ဂနွေ အပျင်းပြေ, ရသ ဆင်ခြေဖုံး
ရွက်ကြမ်းရေကျို အဘိုး မဟုတ် (၄ )
in Hard Truths By Lee Kuan Yew, ဇင်ဝေသော် - on 4/13/2013 - No comments
"ချာချီကလည်း Gaulle လိုပဲ။ သူ့မိန့်ခွန်းကို သူကိုယ်တိုင် စီစဉ် ပြီး ပြောတာ။ ဒါ့ကြောင့် သူ့မိန့်ခွန်းတွေက ရင်ထဲကအထိ လှိုက်ပြီး ဝင်သွား တာ၊ ရင်ထဲက အသံကိုးကွ။ စာရေးဆရာတွေ ရေးပေးတဲ့ မိန့်ခွန်းအချော စားတွေမှ မဟုတ် တာ။" (လီကွမ်းယု)
မေး ။ ။ ဒါဆို မစ္စတာလီက ဘာဖြစ်ချင်တာလဲ။
ဖြေ ။ ။ ရှေ့နေပဲ ဖြစ်ချင်တာ။
မေး ။ ။ ရွေးချယ်ခဲ့တာ မဟုတ်ဘူးဆိုရင် ဘယ်လိုဖြစ်ပြီး နိုင်ငံရေးလောကထဲမှာ ရှိနေရတာလဲ။
ဖြေ ။ ။ ငါတို့ နိုင်ငံရေးထဲ မဝင်ခဲ့ရင် ဒီနိုင်ငံရေးကို ဘယ်သူက ဦးဆောင် မှာလဲ။ ငါတို့ ရထားတဲ့ ဥပဒေဘွဲ့တွေကရော ဘယ်မှာသွား အသုံးချမှာလဲ။ ငါ့မိတ်ဆွေ Eddie Barker ကို ငါပြောခဲ့တာ ဒီစကားတွေပဲ။ “အက်ဒီ … မင်းသာ ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်မပြိုင်ရင် မင်းအစား ကွန်မြူနစ်တွေ ဝင်လာမယ်။ ကွန်မြူနစ်ဝင်လာရင် မင်းဥပဒေတွေက ဘာအသုံးကျတော့မှာလဲ” လို့။ အထပ်ထပ် စဉ်းစားပြီးမှ ငါနဲ့ပေါင်းဖို့ သူ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာ။ နိုင်ငံလည်း တည် တည်ငြိမ်ငြိမ် ဖြစ်ရော ငါ့အိမ်ဝယ်ထားတဲ့ အကြွေးတွေ မပေးရသေးဘူး ဆိုပြီး နိုင်ငံရေးက ထွက်ပြီး ရှေ့နေလုပ် ပိုက်ဆံရှာတော့တယ်။ အဲ့ဒီနောက် ဝန်ကြီးလစာတွေ တိုးပေးဖို့ ငါ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာ။ မင်း ပြောတာက ငါက နိုင် ငံရေးသမား ဖြစ်ချင်ခဲ့တယ်တဲ့။ အဓိပ္ပါယ်မရှိလိုက်တာ။ ကဲ … နောက်မေးခွန်းမေး။
မေး ။ ။ အလေးစားရဆုံး နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များ ရှိသလား။
ဖြေ ။ ။ ရှိတယ်။ De Gaulle (ဒီဂေါ)၊ တိန့်ရှောင်ဖိန်၊ ချာချီ။ De Gaulle က တကယ် ဉာဏ်သွားတဲ့ လူ။ ဆိုလိုတာက သူ့နိုင်ငံက သူများလက်အောက် မှာ၊ သူက ကြယ်တစ်ပွင့်ပဲ ရှိသေးတဲ့ ပြင်သစ်ဗိုလ်လေး။ ဗြိတိသျှနဲ့ အမေရိ ကန်တို့က သူ့ကို ထောက်ခံတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့မူနဲ့သူ နေတာပဲ။ သူ့ကို ကြည့် တယ်။ ပြင်သစ်စကားကို နားမလည်ပေမဲ့ သူပြောတဲ့ စကားတွေကို ခံစားလို့ ရတယ်။ ပြီးတော့ သူ့ရဲ့ အတ္ထုပ္ပတ္တိကိုလည်း ဖတ်ဖူးတယ်။
(Charles De Gaulle ဟာ ၁၉၅၉ ကနေ ၁၉၆၉ ခုအထိ ပြင်သစ်နိုင်ငံရဲ့ သမ္မတပါ။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းက ပြင်သစ်ကို နာဇီတွေ လက်ကနေ လွတ်မြောက်အောင် တော်လှန်ခဲ့တဲ့ လွတ်လပ်သော ပြင်သစ်တပ်မတော် (Free French Force) ရဲ့ ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်။)
ဗြိတိသျှနဲ့ အမေရိကန်တို့က မြောက်အာဖရိကကို ထပ်ပြီး သိမ်းပိုက်တော့ အယ်ဂျီးရီးယားကို သူ သွားခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီမှာ ကြယ်လေးပွင့် အဆင့်ရှိတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကို တွေ့ပြီး သူ့ကို ဒီလို ပြောခဲ့တယ်။
“Giraud … ခင်ဗျာဟာ ပြင်သစ်ရဲ့ စစ်ဗိုလ်ချုပ်တစ်ယောက်ပါ။ အမေရိကန် စစ်သားတွေက ဘာအတွက် အပြင်ကနေ ခင်ဗျားကို စောင့်ရှောက်ပေးနေ ရတာလဲ” တဲ့။
(Giraud ဆိုတာကလည်း ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းက Gaulle နဲ့အတူ ပြင် သစ် အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးကော်မတီရဲ့ ပူးတွဲဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ထမ်းဆောင် ခဲ့သူပါ (The French Committee of National Liberation)
သူက စိတ်ဓာတ် အတော်မာတဲ့လူ။ အမေရိကန်တွေ၊ ဗြိတိသျှတွေက ပဲရစ် ကို စစ်ချီတော့မယ် ဆိုတော့
“ခင်ဗျား မသွားနဲ့။ ပြင်သစ်ကို ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် စစ်ချီမယ်” လို့ ပြောခဲ့တာ။ သတ္တိရော ဗျတ္တိရော ပြည့်စုံတဲ့ လူပဲ။
တိန့်ရှောင်ဖိန်ကတော့ ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုလိုပြိုကဲသွားမလောက် ဖြ စ်နေတဲ့ တရုတ်ပြည်ကြီးကို ဒီနေ့ တွေ့ရတဲ့ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး စီးပွားရေး အချက်အချာ နေရာကြီးတစ်ခု ဖြစ်အောင် ပြောင်းလဲပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ပဲ။
ချာချီကတော့ သူများတွေ လက်မြှောက်ရမယ့် အနေအထားမှာ လက် မမြှောက်ခဲ့တဲ့လူ။ သူ့မိန်းခွန်း ပြောတာကို ရေဒီယိုမှာ နားထောင်ခဲ့ရတယ်။
“သဲသောင်ပြင်တွေပေါ်မှာ ဆက်တိုက်မယ်။ စစ်မြေပြင်မှာ ဆက်တိုက်မယ်။ လမ်းတွေပေါ်မှာ ဆက်တိုက်မယ်” တဲ့။
သူ့ကြည်းတပ်တစ်ဖွဲ့လုံးက အရှုံးနဲ့ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီး Dunkirt ကနေ သင်္ဘော နဲ့ ပြန်ထွက်ပြေးခဲ့ရချိန်မှာ ဒီလို စကားမျိုး ပြောနိုင်ဖို့ဆိုတာ မလွယ်ဘူး။ ဂျာမန်တွေကို တော်လှန်နိုင်ဖို့ တော်ရုံရဲရင့်မှုနဲ့ မရဘူး။ သူ့မှာ သတ္တိအပြည့် ရှိတယ်။ သတ္တိတစ်ခုတည်းနဲ့တော့ မအောင်မြင်နိုင်ဘူးပေါ့။ အခွင့်ကောင်းကို သူ စောင့်ခဲ့ရတယ်။
(ဝင်စတန် ချာချီက ၁၉၄၀ - ၁၉၄၅၊ ၁၉၅၁ - ၁၉၅၅ နှစ်တွေမှာ ဗြိတိန်ရဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်ပါ။ လီ ကိုးကားခဲ့တဲ့ စကားတွေက ချာချီ ရွေးကောက်ပွဲနိုင်လို့ ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်အပြီး ပြည်သူ့အဆောက်အဦးမှာ ၁၉၄၀ - ခုက ပြောခဲ့တဲ့ နာမည်ကြီး မိန့်ခွန်းထဲကနေ ထုတ်နှုတ်ထားတဲ့ စကားတွေပါ)
နောက်ဆုံး ဂျပန်တွေက ပုလဲဆိပ်ကမ်းကို ဝင်တိုက်တော့ ဂျာမန်တွေက လည်း အမေရိကန်တွေကို စစ်ကြေညာခဲ့တယ်။ သူလည်း အဲ့ဒီမှာ ဂျာမန်တွေ လက်က လွတ်သွားတယ်။
နောက် ခေါင်းဆောင်ကတော့ Chamberlain (ချိန်ဘာလိန်) ပေါ့။ သူ ပြောတဲ့ စကားတွေကလည်း ရဲရဲတောက်ပဲ။ (Neville Chamberlain က ၁၉၃၇ - ၁၉၄၀ ခုနှစ်မှာ ဗြိတိန်ရဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်။ ဂျာမန်တွေရဲ့ လက်က လွတ်အောင်ဆိုပြီး ဟစ်တလာနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ယူထားသူပါ)
ဟစ်တလာက ကမ္ဘာကို ခွဲပြီး အုပ်ချုပ်ဖို့ သူ့ကို ကမ်းလှမ်းခဲ့သေးတယ်။ သူက “မလိုချင်ဘူး၊ မင်းက အာဏာရှင်၊ ငါ မင်းကို တိုက်မယ်” လို့ ပြောခဲ့တယ်။ သတ္တိကောင်းတဲ့လူပါပဲ။
မင်းက အမေရိကန်တွေကို မေးရင်တော့ သူတို့က ရူ့စဗဲ့(လ်)လို့ ပြောကြ မှာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ရူ့စဗဲ(လ်)က အာဏာရော ပါဝါရော ရှိတဲ့လူကွ။ တစ်ခါက ရူ့စဗဲ့(လ်)က Harrimam ကို ပြောတယ်။
(Averelle Harrimam က အမေရိကန်တွေရဲ့ ဥရောပဆိုင်ရာ အထူး သံတ မန်ပါ)
“ချာချီရဲ့ မိန့်ခွန်းတွေ နားထောင်လိုက်ရင် စိတ်ဓာတ် တက်ကြွစရာတွေ၊ မင်းတို့ မိန့်ခွန်းရေးတဲ့အဖွဲ့က ဒါမျိုးတွေ ဘာလို့ ရေးမပေးနိုင်တာလဲ” တဲ့။
ဟယ်ရီမန်က သူ့ကို ပြန်ပြောတယ်။
“ချာချီက သူ့ဆေးလိပ်ကို သူကိုယ်တိုင်လိပ်ပြီး သောက်တာ” တဲ့။ အဲဒါ ခြား နားချက်ပဲ။ ချာချီကလည်း Gaulle လိုပဲ။ သူ့မိန့်ခွန်းကို သူကိုယ်တိုင် စီစဉ် ပြီး ပြောတာ။ ဒါ့ကြောင့် သူ့မိန့်ခွန်းတွေက ရင်ထဲကအထိ လှိုက်ပြီး ဝင်သွား တာ၊ ရင်ထဲက အသံကိုးကွ။ စာရေးဆရာတွေ ရေးပေးတဲ့ မိန့်ခွန်းအချော စားတွေမှ မဟုတ်တာ။
မေး ။ ။ မစ္စတာလီ လေးစားတဲ့ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေ အကြောင်းကို ပြောခဲ့တယ်နော်။ မစ္စတာလီ ကိုယ်တိုင်ရော လူငယ် စင်္ကာ ပူရီယန်းတွေက အဲ့သလို အထင်တကြီး အမှတ်တရ ဖြစ်နေတာမျိုး မမျှော် လင့်ဘူးလား။
ဖြေ ။ ။ မလိုချင်ပါဘူး။ ပထမဆုံးအနေနဲ့ ငါ့ကိုယ်ငါ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင် လို့ မသတ်မှတ်ဘူး။ ငါက စိတ်ဓာတ်မာတယ်။ ဇွဲမလျှော့ဘူး။ ခေါင်းမာမာနဲ့ လုပ်တတ်တယ်။ ဒါပဲ။ တစ်ခုခု လုပ်ရင်တော့ မရမချင်း ပေပြီး လုပ်နေတတ် တဲ့အကျင့် ရှိတယ်။ ငါ့ကို ငါမြင်တာကတော့ ဒါပဲ။
ကျန်တာတွေက အဓိပ္ပါယ်မရှိဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်လို့ ကိုယ် ဘာသာ ထင်တဲ့လူတိုင်း စိတ်ရောဂါကု ဆရာဝန်နဲ့ ပြကြည့်သင့်တယ်။
၁၀။ ရွက်ကြမ်းရေကျို အဘိုး မဟုတ်
ရွက်ကြမ်းရေကျို အဘိုး မဟုတ် (၂ )
ရွက်ကြမ်းရေကျို အဘိုး မဟုတ် (၃ )
မြန်မာ့ နှစ်သစ်ကူး ကာလနဲ့ Long Holidays ကို ကြိုဆို နှုတ်ခွန်းဆက်လိုက် ပါတယ်။
in ဇင်ဝေသော်, အမှတ်တရ - on 4/13/2013 - No comments
နီပေါနိုင်ငံ အစိုးရကထုတ်ဝေတဲ့ ရုံးပိတ်ရက် ပြက္ခဒိန်မှာ Sherpa holiday ကို ရက်လွဲပြီး ဖော်ပြထားလို့ ကျောင်းတွေ၊ ရုံးတွေဟာ ရုံးပိတ်ရက်မဟုတ်ပဲ ရုံးပိတ်လိုက်ရတယ်လို့ ခတ္တမန္ဓု ပို့စ်က ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒါနဲ့ ပတ်သက် လို့ ပြည်သူတွေဆီက အသံကတော့
" ဟောဗျာ၊ ရှီပါ ဟောလီးဒေးက အရင်လက ပြီးသွားခဲ့ပြီပဲ " တဲ့။
ဒါနဲ့ပဲ ထပ်ပြီးပတ်သက်လို့ ကျောင်းသားတွေ၊ ဆရာတွေ၊ အစိုးရဝန်ထမ်းတွေကတော့ ကျေကျေနပ်နပ် ရှိကြပါတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ။
ဒါနဲ့ဆက်စပ်လို့ မြန်မာ့ နှစ်သစ်ကူးသင်္ကြန် ရုံးပိတ်ရက်ကတော့ အမှန် အကန် လို့ ယူဆရပါတယ်။ ဒါနဲ့ ပဲ ထပ်ပြီးပတ်သက်လို့ ဒေါ်စုကတော့ ဂျပန်မှာ သင်္ကြန်မယ့်သဘော ထင်ပါရဲ့။ ဒါ့ကြောင့် ဦးသိန်းစိန် ရေကစားမဏ္ဍပ်က ဒီနှစ် ပိုစည်းကားမယ်လို့ ခန့်မှန်းရပါတယ်။ တစ်ခုရှိတာက ဦးသိန်းစိန် ရေ ကစားမဏ္ဍပ်မှာ နောက်ပြောင်ခြင်း သည်းခံပါ၊ ( ရှေ့ပြောင်တာတော့ နား လည်လို့ ရပါတယ် )
ဒါကတော့ တရုတ်ပြည် Special Zone Daily ထဲက သတင်း တစ်ပုဒ်ပါ။ အင်္ဂလိပ်လို အရင်ဖတ်ကြည့်ကြပါအုံး။
" I, Tang Jinhui, carelessly missed the date of registration for my marriage to Miss Zhang on March 13. I deeply apologize for my mistake and for hurting her. I hope Miss Zhang can forgive me." တဲ့။
" ကျနော် တန်ကျင်းဝှေဟာ မကျန်နဲ့ နှစ်ဦးသဘောတူ မင်္ဂလာလက်မှတ်ရေး ထိုးရမယ့် မတ်လ ၁၃ ရက်နေ့ကို အမှတ်တမဲ့ မေ့သွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီလို သူမ ကို နာကျင်စေမိတဲ့အတွက် မကျန်ကို အနူးအညွတ် တောင်းပန်ပါတယ်၊ ခွင့်လွှတ်နိုင်ပါစေ လို့လည်း မျှော်လင့်ပါတယ်" ပေါ့။
မကျန်ဆီက တုန့်ပြန်မှုကိုတော့ ဒီ သတင်းပို့စ်တဲ့ အချိန်အထိ မသိရသေးပါ။
Another country တဲ့ ဟား ဟား ဟား
in ဇင်ဝေသော်, ပြုံးစိစိ - on 4/12/2013 - No comments
တရုတ်ပြည် စက်မှုနဲ့ သတင်းပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီးဌာန ( the Ministry of Industry and Information Technology) က အင်တာနက် ဆင်ဆာနဲ့ ပတ်သက်လို့အရင် တစ်ပတ်ကျော်က 'acts of censorship' ဥပဒေထုတ်ပြန် ခဲ့တယ်။
သူတို့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ ဖေ့စ်ဘုတ်ဆင်ဆာဖြတ် တဲ့ လေးနိုင်ငံ ကို စာရင်းပြ ထားတယ်။
1 ) North Korea
2 ) Cuba
3 ) Iran
4 ) and another country တဲ့။
( မှတ်ချက်။another country ကို အဓိပ္ပါယ်ဖော်ရင် re-education camp ကို အပို့ခံရတယ်။ ဒါ့ကြောင့် re-education camp ကိုလည်း ဘယ်သူမှ အဓိပ္ပါယ် မဖော်ရဲကြ။)
**ပြည်ပရောက် တစ်ဦးချင်းဆီကို 'ထိ' လာနိုင်ပြီး နိုင်ငံ အတွက် ကောင်းလာနိုင်တဲ့ အနေအထား**
in ဇင်ဝေသော်, အမျိုးသားရေး - on 4/12/2013 - No comments
ခေါင်းစဉ်က ရှည်နေပေမဲ့ ရေးချင်တာက တိုတိုပါ။ လတ်တလော စင်္ကာပူမှာ (အခြား အာရှနိုင်ငံတွေမှာလည်း သိပ်မထူးခြားလောက်ပါဘူး ) ကြားနေရတဲ့ သတင်းနှစ်ခုက
၁ ။ စလုံးကုမ္ပဏီတချို့ ရန်ကုန်ကို တော်တော်အာရုံကျနေကြတယ်။ အကြီး စား တီမာဆက်၊ ဆင်းတယ်လ်၊ စထရိတ်တိုင်းတို့ အပါအဝင်ပဲ။ တချို့က သွားကြည့်၊ ကုမ္ပဏီရုံးခွဲဖွင့်၊ တချို့က စောင့်ကြည့်ရုံ စောင့်ကြည့် ၊ စုံလိုပဲ။
၂ ။ မြန်မာတွေလည်း တော်တော် တပ်ခေါက်နေကြတယ်။
ဒီ ဒုယအချက်မှာက ဖြစ်နိုင်ခြေ နှစ်ခုရှိပါတယ်။ တချို့က တပ်ခေါက်တာ။ တချို့က 'ထိ' တာ။ ဘာလို့ထိတာလဲဆိုတော့...
၁ ။ စင်္ကာပူက မြှင့်လာတဲ့ ခရိုက်တီးရီးယားကြောင့် ( လစာ၊ ပညာအရည် အချင်း၊ လုပ်သက်၊ ကွန်ထရီဗြူးရှင်း )၊
၂ ။ စီးပွားရေးသမားတွေရဲ့ စီးပွားရေး ကျားကွက် ရွှေ့မှု (သို့ ) ပေါ၊ ချောင် ၊ ကောင်း အလုပ်သမားဈေးကွက်ကို ဈေးချိုနိုင်သမျှ ချိုအောင် အားထုတ်မှု။
ဒုတိယအချက်ကတော ပုံသေကားချ ပြောလို့မရပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ငြင်းဖို့တော့ ခက်မယ်။ ဒါဟာ အက်သစ်ကယ် ဖြစ် မဖြစ်ဆိုတာကလည်း ပါးစပ်နဲ့ပဲ ငြင်း လို့ရမယ်။
၁ ။ စင်္ကာပူက မြှင့်လာတဲ့ ခရိုက်တီးရီးယား
လစာသိပ်မကောင်း၊ သာမန်ဘွဲ့လောက်နဲ့ဆိုရင် ကွန်ထရီဗြူးရှင်းလည်း မကယ်ဘူးဆိုရင် မနှစ်က၊ ဒီနှစ်ကစလို့ လာမယ့်နှစ်တွေမှာ ဆက်ထိနေဖို့ များပါတယ်။ ဒါက နိုင်ငံခြားသား အားလုံးနဲ့ ဆိုင်ပါတယ်။ ဒါကို သဘောမပေါက်ရင် ယုံထင် ကြောင်ထင် ထင်စရာတွေ အများကြီးပါပဲ။
ဒီမှာ စလုံးအစိုရက ဘယ်လောက်အလေးအနက် ထားသလဲဆိုတာ ရှင်းပြလို့ ရတဲ့အချက်တွေရှိတယ်။ အလုပ်သမားတစ်ယောက်က ပညာအရည်အချင်း၊ လုပ်သက်၊ ကွန်ထရီဗြူးရှင်း အားလုံးကောင်းနေတယ်၊ လစာပဲ နည်းနေတယ် ဆိုရင် အလုပ်သမားရဲ့ အားနည်းချက် လုံးဝမဟုတ်တော့ပဲ အလုပ်ရှင်ပေးတဲ့ လစာနဲ့ပဲ ဆိုင်တော့တယ်။ ဒါဆို ( နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမားက တကယ် အဆင့်ရှိရင်) အစိုးရကပါ အလုပ်ရှင်ကို လစာတိုးပေးဖို့ မသိမသာ ဖိအားပေးတယ်။
ဆိုလိုတာက ဒီလစာနဲ့ပဲ ထပ်တင်ရင် ရီဂျက်ထပ်ထိမယ်။ တကယ်လိုအပ်ရင် လစာတိုးပေးပါ ဆိုတာမျိုးပေါ့။ ကျန်တာကတော့ အလုပ်ရှင်နဲ့ပဲ ဆိုင်တော့ တယ်။ အလုပ်ရှင်ကလည်း သူ့အတွက် ဒီအလုပ်သမားက ဘယ်လောက် ကွန်ထရီဗြူးရှင်းလုပ်ပေးနိုင်သလဲ ဆိုတာကိုကြည့်ပြီး လစာ တိုး မတိုး ဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မယ်။
ဒီမှာပဲ ထိသူထိ မထိသူမထိ ဇာတ်လမ်းတွေ ဖြစ်တော့တာပါပဲ။ ဒါကြောင့် စင်္ကာပူကနေ တပ်ခေါက်သူ၊ တပ်ခေါက်ရသူ ပိုများလာမယ်။ အလုပ်အကိုင် အတွေ့အကြုံရှိသူတွေ ပြည်တွင်းပြန်ရောက်သွားခြင်းဟာ နိုင်ငံအတွက် ကောင်းပါတယ်။
၂ ။ စီးပွားရေးသမားတွေရဲ့ စီးပွားရေး ကျားကွက် ရွှေ့မှု
ဒီအတွေးက နည်းနည်း ရက်စက်ရာရောက်နေမလားလို့တောင် ထင်မိတယ်။ ကျနော်က စင်္ကာပူကို ဦးတည်ပြောနေပေမယ့် ဒီအချက်က အခြားနိုင်ငံတွေ နဲ့လည်း ဆိုင်ပါတယ်။ စင်္ကာပူက ရီဂျက်ထိတဲ့ မြန်မာတစ်ယောက်ဟာ မြန် မာပြည်ပြန်ရောက်သွားပြီး မြန်မာပြည်မှာပဲ (စီတီဇင် ခံထားသူတွေ၊ ပီအာ တချို့ ဒီအထဲမှာ မပါပါဘူး၊ ပီအာတချို့ဆိုတာက ပီအာလည်း အာမခံချက် သိပ်မရှိလုိ့ပါ ) အလုပ်လုပ်ရတော့မှာပါ။
နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတွေကလည်း မြန်မာပြည်ရောက်ရင် လုပ်အားခ ဈေးချိုချိုနဲ့ ရသလို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အတွေ့အကြုံမရှိသေးတဲ့ အလုပ်သမားတွေ ရဲ့ဒဏ်ကိုလည်း တော်တော်သည်းခံကြရလိမ့်မယ်။ ဒီမှာ မြန်မာတွေ ညံ့ တယ်လို့ဆိုတာမဟုတ်ဘဲ အတွေ့အကြုံမရှိသေးတာကိုပဲ ဆိုလိုတာဖြစ်ေ ကြာင်း ထပ်ပြောခဲ့ချင်ပါတယ်။( အမျိုးချစ်တာ ချစ်တာပေါ့၊ ဒီနေရာမှာတော့ ကိုယ့်အားနည်းချက်ကို လက်ခံကြရအောင်၊ သာကီမျိုး မဟုတ်ဘူးလို့ မပြောပါဘူး )။
ဒီတော့ ဈေးလည်းချို ပြည်ပ အတွေ့ကြုံလည်းရှိတဲ့ အလုပ်သမားကို နိုင် ငံခြား ကုမ္ပဏီတွေက အလိုရှိမှာ အသေအချာပဲ။ ကဲ ဒီတော့... တကယ်ပြန်တွေ့ဖို့ ရာခိုင်နှုန်း များတာက ပြည်ပက လာဖွင့်တဲ့ကုမ္ပဏီ နဲ့ ပြည်ပမှာ အလုပ်လုပ်ပြီး ပြန်လာတဲ့ မြန်မာတွေပါပဲ။ မမိုက်ဘူးလား။ စင်္ကာပူမှာ ဒေါ်လာ၂၀၀၀ နဲ့ ၃၀၀၀ ( ကျော်ရင် ကျော်နိုင်တာပေါ့ ) ပေးရ မယ့် အလုပ်သမားကို မြန်မာပြည်မှာ ၁၀၀၀ လောက်ဆိုရင် ရနေပြီ။ ဒါကြောင့် ပြည်ပရောက် မြန်မာတွေအတွက်အစိုးရ ပေါ်လစီကြောင့်တင် မဟုတ်တော့ဘဲ ဈေးကွက် အရွှေ့အပြောင်းကြောင့်ပါ အထိများလာနိုင်ပါ တယ်။
ဒီမှာ ချွင်းချက်က အောက်စတန်းဒင်းဖြစ်တဲ့ မြန်မာတွေပါပဲ။ သူတို့ ကုမ္ပဏီ မြန်မာပြည်အသွားမှာ သူ့ကို စင်္ကာပူကခန့်တဲ့ အလုပ်၊ ပေးတဲ့လစာ စတဲ့ စံနှုန်းတွေနဲ့ ဆက်လက်ခန့်ထားပြီး မြန်မာပြည်မှာ လည်ပတ်ဖို့ တာ ဝန်ပေးပါလိမ့်မယ်။
ဒီပေါ်လစီက ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ပေါ်လစီပါ။ အမေရိက ကုမ္ပဏီတစ်ခုက စင်္ကာပူမှာ ရုံးစိုက်တော့မယ်ဆိုရင် ပိုပြီးတိုးအားကောင်း၊ လူမျိုးဘာသာစကား လည်း ပြဿနာ မရှိနိုင်တဲ့ စလုံးကို ရွေးပြီး လည်ပတ်ခိုင်းသလိုပါပဲ။ ဒါကြောင့် ကိုယ်က တော်တော် အရေးပါတဲ့အထဲမှာ မပါဘူးဆိုရင်တော့ နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတွေက မြန်မာအလုပ်သမားတွေကို "See you In Myanmar." သဘောထား ရှိနေနိုင်ပါတယ်။
ဒီလူ၊ ဒီအရည်အချင်းကို ဒီတစ်ဝက်မရှိတဲ့လစာနဲ့ရတာ ဘယ်သူ မပျော် ဘဲ နေမလဲ။
နောက်ဆုံးကျန်နေတာက တကယ်ကို တပ်ခေါက်ပြန်သွားသူတွေပါ။ ဒီမှာ အဆင်တပြေရှိလျက် တပ်ခေါက်ပြန်သွားသူတွေက နယ်ကထက် ရန်ကုန် က ဖြစ်ဖို့များတယ်။ ရန်ကုန်မှာ မိသားစု၊ အခြေခံစီးပွားရေး စတာတွေ ရှိပြီးသားတွေ ဖြစ်မယ်။ ဒီမှာ မိသားစု၊ ကလေးတွေနဲ့လူတွေ ဖြစ်ဖို့ထက် လူလွတ်တွေ ပိုများလိမ့်မယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။ ဒီလိုမှ မဟုတ်ရင်တောင် ဒီမှာ လခစားလုပ်တာထက် ဟိုမှာ ကိုယ်ပိုင် အလုပ် ပြန်လုပ်ကြည့်မယ်၊ အရဲစွန့်ကြည့်မယ်ဆိုတဲ့ Risk ယူသူတွေ ဖြစ်နိုင် ပါတယ်။ ရေလိုက် ငါးလိုက်လေးပဲ နေချင်သူတွေကတော့ ဒီမှာ အဆင်ပြေေ နသရွေ့ ဒီမှာပဲ နေနေကြဦးမယ့် သဘောပါ။ မြန်မာဟာ စင်္ကာပူမဟုတ်သေး ဘူး ဆိုတာလောက်တော့ သူတို့လည်း သိတာပေါ့။ ဒါကြောင့်လည်း Risk ယူတယ်လို့ သုံးရတာပါ။
အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ အလုပ်သမား ရှားပါးချိန်မှာ အတွေ့အကြုံရှိပြီးသား မြန် မာတွေ ပြည်တွင်းထဲ ပြန်ရောက်သွားခြင်းကြောင့် ပြည်တွင်းက အလုပ်သ မားတွေကို လက်တွဲပြီး ခေါ်သွားနိုင်သလို ပြည်ပ ကုမ္ပဏီတွေ ပြည်တွင်းထဲ မှာ မြန်မြန် ဝင်လာပြီး လည်ပတ်ဖြစ်စေဖို့ အထောက်အကူလည်း ဖြစ်ပါလိမ့် မယ်။
ဘာပဲဆိုဆို စလုံးအစိုးရရဲ့ ခရိုက်တီးရီးယား မြှင့်လာတဲ့ ပေါ်လစီကြောင့် တစ်ဦးချင်းဆီမှာ ရီဂျက်တွေ ဆက်ထိလာပြီး ( နိမိတ်မရှိ၊ မင်္ဂလာမရှိ တာတွေ လျှောက်ရေးနေတယ်ထင်ရင် တောင်းပန်ပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ ဒါက နှစ်နှစ်ေ လာက်ကတည်းက စနေတဲ့ ပေါ်လစီပါ၊ ထိလည်း တော်တော်ထိနေပါပြီ ) နိုင်ငံအတွက်တော့ ဇိကုပ် နတ်ပြည်တင်လို့တောင် မြင်မိပါတယ်။
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ခေါ်လို့ ပြန်ချင်မှ ပြန်မှာ ရီဂျက်ထိရင်တော့ ပြန်ကို ပြန် ရတော့တာ မဟုတ်လား။
ကျနော်ကတော့ ဒါဟာ ငိုစရာမဟုတ်သလို ထိသွားသူအတွက်လည်း ဘေး က ဝင်ငိုပေးနေစရာ မလိုလှဘူး ထင်ပါတယ်။ ကိုယ့်နိုင်ငံသာ ကိုယ့်နိုင်ငံပါ။ ဒီမှာ ကျနော်တို့ ယာယီလာနေကြတာ။ အဲ တစ်ခုခုကြောင့် ထွက်လာခဲ့ကြ တာ။ ဒါပဲ။
နိုင်ငံတစ်ခု ကုန်းထနေရတဲ့ အချိန်မှာ နိုင်ငံသားတိုင်းရဲ့ အနစ်နာခံမှု အနည်း အများ လိုပါတယ်။ အနုမြူဗုံး ခေါင်းပေါ်မကျပေမဲ့ နိုင်ငံက ဒီထက်ဆိုးတဲ့ စစ် တပ်အစိုးရရဲ့ အကြမ်းမြူဗုံးဒဏ်ကို ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းမျာစွာ ခံထားကြရတာ မဟုတ်လား။
ပုဂ္ဂလိကအမြင်မတူတာ၊ တစ်ယောက်ယောက်၊ တစ်ဖွဲ့ဖွဲ့ကို ထိပါးတာမျိုး မရည်ရွယ်ဘဲ ဖြစ် ခဲ့ရင် တောင်းပန်ပါတယ်။
in စာတိုပေစ, ဇင်ဝေသော် - on 4/11/2013 - No comments
မာဂရက် သက်ချာတို့ ဘယ်လောက်ပဲ အလုပ် လုပ်ခဲ့လုပ်ခဲ့၊ သေဆုံးချိန် မှာတော့ မကျေနပ်သူ လူတချို့အတွက် စုန်းမကြီး ဖြစ်ရတယ်။ "Ding Dong, the Witch is Dead" သီချင်း ဒေါင်းလုပ်လုပ်တာ ယူကေမှာ ရက်ကော့ဒ်ဝင်သွားသတဲ့။
စောစောရက်ပိုင်းလေးကပဲ ဈာပနမှာ မဖွင့်သင့်တဲ့ အင်္ဂလိပ်သီချင်း ငါးပုဒ် အကြောင်း ဟာသဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကို ဖတ်လိုက်ရတယ်။ ဒါတွေက......
1) Ding Dong, the Witch is Dead.
2) Going Underground.
3) Burn, Baby Burn.
4) Highway to Hell.
5) Staying Alive.
in ဇင်ဝေသော်, မောနင်း ပို့စ် - on 4/11/2013 - No comments
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အင်တာနက် အသည်းစွဲထင်နေတဲ့လူတွေ စဉ်းစားစရာေ တာ့ ရှိနေပါပြီ။ ဒီလောက်စွဲနေရင် ၆ နှစ်လုံးလုံး အိမ်မပြန်ဘဲ အင်တာနက် ကဖေးမှာ နေနိုင်ပါ့မလား။ ရှင်ဝှာသတင်းဌာနအရ (သူ့နာမည်ကို ဆိုင် က အလုပ်သမားတွေဆီက မေးလို့) သိရတာက Li Meng တဲ့။ သူကိုယ်တိုင်ကတော့ ၆ နှစ်လုံးလုံး ဘယ် လူသားနဲ့မှ စကားမပြောပါဘူး။
သူဟာ Jilin တက္ကသိုလ်နားမှာရှိတဲ့ အင်တာနက် ကဖေးတစ်ခုထဲကို အီးမေး စစ်ဖို့ 2007 နှစ် မေလက ဝင်သွားလိုက်တာ အခုချိန်အထိ အဲဒီ ကဖေးထဲမှာ ရှိတုန်းပါပဲ။ တစ်လကို အင်တာနက်သုံးခ ဒေါ်လာ ၅၀၀ ကျတယ်။ ဒီငွေ ပြန် ရအောင် အွန်လိုင်းပေါ်မှာပဲ ရှာပုံရတယ်လို့ ဆိုင်ရှင်က ပြောသတဲ့။ အလုပ် လုပ်တာ၊ ဂိမ်းကစားတာ၊ စားတာ၊ အိပ်တာ ဒါတွေအားလုံး ကွန် ပျူတာရှေ့ က ထိုင်ခုံပေါ်မှာပဲ ကိစ္စပြီးတယ်။ "အိမ်ပြန်ချင်တယ် ဟူး" လို့ သူမအော်ဘူး။
စောစောပိုင်းက သတင်းတစ်ပုဒ် ဖတ်လိုက်မိကြမလား မသိဘူး။ Samoa Air လိုင်းက လေယာဉ်စီးခကို ကိုယ်အလေးချိန်နဲ့ အညီ တောင်းမယ်တဲ့။ မန္တလေးက ဆိုက်ကားဆရာကျနေတာပဲ။ အိုဗာဝိတ်တွေအတွက် အိုဗာ ပရိုက်ဇ်ပဲ။ စီးပွားရေးသမားတွေက ဘယ်တော့မှ အရှုံးမခံဘူး။ အိုဗာဝိတ်တွေဆီကကျ ငွေ ပိုတောင်းပြီး ပုံမှန် ကိုယ်အလေးချိန်အောက်မှာ ရှိသူတွေကို လျှော့တောင်းမယ်ဆိုတာမျိုးကျ ပါမလာဘူး။
ဒါနဲ့ စကားမစပ် ကမ္ဘာပေါ်မှာ မကြာမကြာ ကမ္ဘာကျော် ငပေါတွေ ပေါ်ပေါ် လာတတ်တယ်။ စောစောပိုင်းက ဆဒန် ဟူစိန်၊ အခု ဖက်တီး Kim Jong Un။
သူကမှ Psy အစစ်။ ဂန်းမဲန်း စတိုင်လ်။
စင်္ကာပူနတ်လည်း "ကိုင်" တတ်သည်
in 3D ဘာသာရေး, သီဟနာဒ - on 4/10/2013 - No comments
နာနာဘာဝပြီးလျင် နောက်ထပ်ရှင်းရခက်သည့်ကိစ္စက နတ်ကိုင်ခြင်းဟုထင် သည်။ ယုံရလည်းခက်၏၊ သို့သော် ရှိပုံလည်း ရ၏။ အနည်းဆုံး ခူးတိတ်ပွပ် မိသားစုအတွက်တော့ ဤ ကိစ္စသည် ဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက် ထားရစ်ခဲ့သည့် မှာတမ်းဖြစ်လေသည်။ မစ္စတာ ခူးတိတ်ပွပ်က နှယ်နှယ်ရရပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်၊ စင်္ကာပူ၏ အချမ်းသာဆုံးအုပ်စုတွင်ပါသည်။ ရီရွှန်းမှာ မကြာမီက ဖွင့်လှစ်ခဲ့ သည့် ခူးတိတ်ပွပ် ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံက ( Khoo Teck Puat Hospital Singapore - KTPH )သူ့အမည်ပင်ဖြစ်သည်။ စင်္ကာပူမှာ ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံ ဆိုသည်က လက်ချိုးလို့ရသည်။
နတ်ကိုင်ခြင်း စတင်ဖြစ်ပွားစဉ်က ကိုယ်တိုင်ပင် စင်္ကာပူမရောက်သေး၊ ရှေး ပျံလွန်တော်မူခဲသော သီရိလင်္ကာဆရာတော်ကြီး လက်ထက်ကဖြစ်သည် ။ ဖြစ် ပုံက အလုပ်သမားများက သစ်ပင်စောင့်နတ်ကို တောင်းပန်ခြင်းစသည် ဘာမှမလုပ်ဘဲ ခုတ်လှဲပုံရ၏။ ထိုအခါ ထိုသစ်ပင်စောင့်နတ်က ဒေါ်ခူးတိတ် ပွပ် ကို ဝင်ကိုင်လေတော့သည်။ ရုတ်တရက်ကြီး လေဖြတ်သလိုလဲကျသွားသည်။ စကားလည်း မပြောနိုင်တော့ပေ။ သူဌေးများဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ ဆေးရုံကို ချက်ချင်း သွားကြသည်။ ဆေးရုံးမှာလည်း ရောဂါ၏ အရိပ်လက္ခဏာကို ရှာဖွေလို့မရ။ နောက်ဆုံး သီရိလင်္ကာဆရာတော်ကြီး၏ ဩဝါဒကို ခံယူရန် ရောက်လာကြသည်။ ဆရာတော်က ဤကိစ္စမျိုး ဖြစ်တတ်ကြောင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ ထိုထို သစ်ပင်စောင့်နတ်ကို တောင်းပန်၊ မေတ္တာပို့လျှင် ရကြောင်းရှင်းပြပြီး သူကိုယ်တိုင် အိမ်သို့ကြွကာ ဘာသာရေး လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း လုပ်ဆောင်ပေး ခဲ့သည်။ မကြာမီ ချက်ချင်းပင် ဒေါ်ခူးတိတ်ပွပ်လည်း ပကတိအတိုင်း ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာခဲ့သည်ဟု ဆိုကြသည်။
"သစ်ပင်ခုတ်ခြင်း၊ ဖြတ်ခြင်းမပြုလုပ်မီ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီး ကို ပင့်ပြီး မေတ္တာအရင်ပို့ စေရမည်" က မစ္စတာ ခူးတိတ်ပွပ်၏ ဘိုးစဉ်ဘောင် ဆက်လိုက်နာရန်မှာတမ်းဖြစ်လေတော့သည်။
ပထမဆုံးအကြိမ် သူတို့အိမ်ထဲ ရောက်ဖူးစဉ်က အလွန်အံ့ဩမိသည်။ စင်္ကာပူလို နိုင်ငံပေါက်စလေးမှာ ဤမျှ ကျယ်ဝန်းသောခြံကြီးဖြင့်နေသူ မရှိနိုင်ေ လာက်ဟု ထင်ထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သူတို့ခြံဝင်းက ရန်ကုန်ကခြံဝင်း များနှင့်ပင် မတူ။ တောင်ကြီး၊ မေမြို့စသောနယ်မြို့များကခြံဝင်းများနှင့်ပင် တူနေသည်။ မြေကမညီ၊ ခြံဝင်းအလယ်က ကုန်းကမူပေါ်မှာ တိုက်အိမ် အတွဲ လိုက်ဆောက်ထားသည်။
ပတ်ပတ်လည်က သစ်ပင်ကြီးများဖြင့် တောအုပ်သဖွယ် ဖြစ်နေသည်။ နတ်ကိုင်မည်ဆိုက ကိုင်လောက်ပေသည်ဟု သစ်ပင်ကြီးများကို ကြည့် ရင်း တွေးလိုက်မိသည်။
ခူးတိတ်ပွပ်ရှိစဉ် ဘာသာယုံကြည်မှုက ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပြီး လေးထပ်ကျောင်းဆောင်ကြီး ပြီးမြောက်ရေးအတွက်ပင် သူတို့ အလှူငွေ များစွာပါ ဝင်ကြောင်း သိရသည်။ ယခုတော့ မိသားစုထဲမှာ အခြားဘာသာယုံကြည်မှု များလည်း ရှိနိုင်သည်ဟု တွက်ဆလို့ရသည်။ သို့သော် မည်သည့်ဘာသာဝင် မျိုးဆက်သစ်မဆို တညီတညွတ်တည်း လိုက်နာကြရသည်က မစ္စတာ ခူးတိတ်ပွပ်၏ "သစ်ပင်ခုတ်ခြင်း၊ ဖြတ်ခြင်းမပြုလုပ်မီ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော် ကြီးကိုပင့်ပြီး မေတ္တာအရင်ပို့ စေရမည်" ဖြစ်လေသည်။
ကွန်ပျူတာစနစ်ဖြင့် တစ်နိုင်ငံလုံးထိန်းချုပ်ထားသော စင်္ကာပူလို နိုင်ငံ မှာ ရှေးဟောင်းဆန်သော (အချို့က ဤသို့ယူဆသည်) ယုံကြည်မှုမျိုး မရှိနိုင်ဟုဆိုက မှားသည်။ သူတို့ခြံထဲက သစ်ပင်ခုတ်၊ ဖြတ်တိုင်း သစ် ပင်စောင့်နတ်ကို မေတ္တာပို့ရန် သွားရဆဲဖြစ်သည်။ အံ့ဩမိ၏။ ထင်မထားခဲ့။
သွားပြီး ပြန်လာတိုင်းလည်း ချက်လက်မှတ် တစ်စောင် လှူလိုက်သည်။ လှူတာကိုလည်း ဘဏ္ဍာရေးမှူးကို အပ်လိုက်သည်။ ထို့ကြောင့် ကျောင်းအလှူငွေ နည်းသောလများတွင် ဘဏ္ဍာရေးမှူးက ခူး မိသားစု သစ်ပင်မခုတ်တာ ကြာပေါ့ဘုရား ဟု ' စ ' တတ်လေသည်။
in Reader's Digest, ဇင်ဝေသော်, ပြုံးစိစိ - on 4/09/2013 - No comments
ဒီလိုကိစ္စတွေ ဖားသားကြီး မာတင်မှာ ကြုံလာရတယ်ဆိုလို့ကတော့ နည်း နည်းမှ အံဩစရာမရှိပါဘူး။ အဆောင်မှာ လူနာစာရင်းတွေကို သူ ကိုင်ရ တဲ့နေ့ဆို လူနာနဲ့ နာမည် အမှန်တွဲလျက်ရှိတယ်ဆိုတာ ခပ်ရှားရှားပဲ။
တစ်နေ့တော့ ရထားစီးရင်း လက်မှတ်ပျောက်နေလို့ လက်မှတ်စစ်လာတော့မှ သူ့လက်မှတ် ဘယ်ထားမိမှန်းမသိ အသည်းအသန် လိုက်ရှာနေတယ်။
သူ့အကြောင်းကို ကောင်းကောင်းသိထားတဲ့ လက်မှတ်စစ်က
" ဖားသားမာတင်၊ ရှာမနေပါနဲ့၊ ဖားသားကြီးကို ကောင်းကောင်း မှတ်မိပါ တယ်၊ လက်မှတ် ဝယ်ခဲ့တယ်ဆိုတာလည်း သိပါတယ်"
" မရှာလို့ မဖြစ်ဘူး၊ ဘယ်သွားမယ်ဆိုတာက လက်မှတ်ထဲမှာပဲ ရေးထား တာ" တဲ့။
RD. (Linus Ascheman)
ကြိုးဟောင်းနဲ့ ပြန်ချည်လာတဲ့ ပျော်ရွှင်တဲ့ မိသားစုဘဝ ( ၂ )
in ဇင်ဝေသော်, ဘာသာပြန် - on 4/09/2013 - No comments
ကြိုးဟောင်းနဲ့ ပြန်ချည်လာတဲ့ ပျော်ရွှင်တဲ့ မိသားစုဘဝ ( ၁ ) မှအဆက်
၃။ The Oscillating family narrative
အကျိုးသက်ရောက်မှု အကြီးမားဆုံးကတော့ သူတို့အရွယ်နဲ့အညီ အဆိုးတွေရော၊ အကောင်းတွေပါ ထိန်ချိန်မထားဘဲ ပြောပြခြင်းလို့ ဆိုပါတယ်။
“တို့ မိသားစုထဲမှာ အဆိုးတွေရော၊ အကောင်းတွေပါ ဆုံတွေ့ခဲ့ရတယ်။ ငါတို့ မိသားစုပိုင် စီးပွားရေးဟာ သိပ်ကောင်းခဲ့တယ်။ မင်းတို့ အဘိုးဆိုရင်လည်း ( ) အဖွဲ့အစည်းမှာ အလွန်အရေးပါခဲ့တဲ့ လူကြီးလူကောင်း တစ်ယောက်ပေါ့။ ပြီးတော့ ( ) ဆေးရုံရဲ့ ဘုတ်အဖွဲ့ထဲမှာလည်း ပါဝင်တယ်”
“အဲသလိုပဲ။ အဆိုးတွေလည်း ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်။ မင်း ဦးလေးဆိုရင် ( ) အမှုနဲ့ အဖမ်းခံခဲ့ရဖူးတယ်။ ( ) ခုနှစ်က ငါတို့ ရပ်ကွက် မီးလောင်လို့ တို့အိမ်ပါ ပါသွားတယ်။ ဘာမှ သယ်ယူချိန် မရခဲ့ဘူး။ ဒီကြားထဲ အဖေက လည်း အလုပ်မရှိ ဖြစ်နေရတာ အကြာကြီးပဲ။ ဘာတွေပဲ ဖြစ်ဖြစ် တို့မိသားစု က မိသားစုပဲ။ အဆိုးနဲ့ကြုံလည်း ဒီမိသားစု၊ အကောင်းနဲ့ကြုံလည်း ဒီ မိသား စု၊ လက်တွဲညီညီနဲ့ ရင်ဆိုင်ခဲ့၊ မျှဝေခဲ့စားခဲ့ကြတယ်။”
ဒီလို စကားတွေဟာ ကလေးရဲ့ မိသားစုအပေါ်ထားတဲ့ စိတ်ဓာတ်ပါ ပြောင်း လဲခိုင်မာ လာစေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
သူတို့ကိုယ်တိုင် မိသားစုနဲ့ တစ်သားတည်း ဖြစ်သွားတော့မှ သူတို့ တွေး ပုံခေါ်ပုံတွေဟာ သူတို့အတွက်ဆိုတဲ့ အဆင့်ကို ကျော်သွားပြီး မိသားစု အ တွက် ဆိုတဲ့ အဆင့်ကို ရောက်သွားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
မိသားစုနဲ့ ပတ်သက်တာတွေကို ပြောဖို့ အခွင့်အလမ်း ရှာကြရာမှာတော့ အရှေ့နဲ့အနောက် တူမယ် မဟုတ်တော့ပါဘူး။ အနောက် ယဉ်ကျေးမှု မှာတော့ မိသားစုလိုက် ဟောလီးဒေး ခရီးထွက်စဉ်၊ ဈေးဝယ်သွားစဉ် တွေမှာ ကြုံသလို ပြောပြပေးနိုင်ပါတယ်။
ဟောလီးဒေးတွေ ထွက်လေ့သိပ်မရှိတဲ့ မြန်မာတွေမှာတော့ ကလေးတွေနဲ့ အတူ အိပ်ယာဝင်ချိန် လသာတဲ့ ညအခါတွေမှာ သူတို့ အိပ်မပျော် ခင် ပြော ပနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်ပဲ လူကြီးသူမတွေက အိပ်ယာဝင် ပုံပြင်တွေ ပြောပြခဲ့ကြတာကိုးလို့ စဉ်းစားမိရင်း ကျေနပ်ရပါတယ်။
ကိုယ့်ခံစားမှုနဲ့ ပြောရရင် ကျနော့်အဖေဟာ သုံးပတ်လောက် အချုပ်ကျ ခံခဲ့ရဖူးတယ်။ ဝါကုန်သည်လုပ်ရင်း တော်တော် ပိုက်ဆံရှိတဲ့အထဲ ပါဖူးတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျနော် လူမှန်း တကယ်သိလာတဲ့ အချိန်မှာတော့ ဒါတွေက မရှိတော့ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အဖေဟာ အချုပ်ခံခဲ့ရဖူးတယ်ဆိုတာနဲ့ သူဟာ တောသား တစ်ယောက်အနေနဲ့ တိုင်းကိုယ်စားလှယ် (တောင်သူလယ်သမား) အဆင့်အထိ ရောက်ခဲ့ရဖူးတယ်ဆိုတဲ့ အဖေ၊ အမေတို့ ပြောပြခဲ့တာတွေဟာ ဒီနေ့အထိ ပြတ်ပြတ်ထင်ထင် ရှိနေဆဲပါပဲ။
ဒါကြောင့် ဒီစိတ်ပညာ သိပ္ပံဆောင်းပါးကို စိတ်ထဲကနေ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ခံစား ယုံကြည်လိုက်ရတယ်။
တကယ်တော့ ကျနော်တို့ခေတ်က လူတိုင်းလိုလိုဟာ အိပ်ယာဝင် ပုံပြင်တွေ နဲ့ သိပ် မဝေးခဲ့ကြပါဘူး။ လူတိုင်းကိုယ်စီမှာ မတူညီတဲ့ ပုံပြင်တွေ ရှိနေကြပါ တယ်။ ဒီပုံပြင်တွေဟာ ကျနော်တို့ဘဝရဲ့ ဦးတည်ရာကို တစ်တပ် တစ် အား ထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်ဆိုတာ ငြင်းလို့ မရပါဘူး။
ကွန်ပျူတာ၊ အင်တာနက်တွေကြောင့် အိပ်ယာဝင် ပုံပြင်တွေနဲ့ ဝေးပြီး ရင်း ဝေးနေကြရတဲ့ မိသားစုဘဝတွေဟာ ပြဿနာကို ရင်ဆိုင်ရာမှာ အရင် လို စည်းစည်းလုံးလုံး မရှိလှဘူးလို့လည်း ထောက်ပြကြတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီဆောင်းပါးဆရာကတော့ …
“If you want to haveahappy family, create, refine, and retell the stories of your family’s positive moments and your ability to bounce from the difficult ones” လို့ ပြောထားတယ်။
ပိုပြီး ပျော်ရွှင်တဲ့ မိသားစုဘဝကို ပိုင်ဆိုင်ချင်ရင် ကလေးတွေကို စိတ်ဝင် စားဖွယ် ဖြစ်အောင် မိသားစုရဲ့ အားသာချက်၊ ကောင်းကွက်တွေကို ရှာကြံပြောပေးပါ။ အခက်အခဲတွေကြားက သင် ဘယ်လို ရုန်းကန် ထိုးဖောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုလည်း ပြောပေးပါတဲ့။
အိပ်ယာဝင် ပုံပြင်တွေဟာ ဘဝမှာ အရေးပါတယ်ဆိုတာ သိကြပေမဲ့ ဒါဟာ မိသားစု ပျော်ရွှင်ရေး သိပ္ပံပညာဆိုတာ အခုမှ သိခွင့်ရလိုက်တဲ့အတွက်တော့ Dr. Duke တို့ကို ကျေးဇူးစကား ပြောခဲ့မှ တာဝန် ကျေပါလိမ့်မယ်။
ဦးအောင်မင်းတို့လာမယ့် စင်္ကာပူက ဆွေးနွေးပွဲ (သို့)ေ...
ရှင်းသန့်စိမ်းလဲ့ကျွန်း (၉း၂) Hard Truths.( Chap...
မြန်မာ့ နှစ်သစ်ကူး ကာလနဲ့ Long Holidays ကို ကြိုဆိ...
**ပြည်ပရောက် တစ်ဦးချင်းဆီကို 'ထိ' လာနိုင်ပြီး နိုင...
ကြိုးဟောင်းနဲ့ ပြန်ချည်လာတဲ့ ပျော်ရွှင်တဲ့ မိသားစုဘ...
အစိုးရလည်း ပါတယ်၊ အစိုးရချည်းလည်းမဟုတ်
ရဟန်းမှာလည်း ကံဆိုးသောနေ့ ရှိ၏ (တနင်္ဂနွေ အပျင်းပြေ )
ကြိုးဟောင်းနဲ့ ပြန်ချည်လာတဲ့ ပျော်ရွှင်တဲ့ မိသားစုဘ...
နာနာဘာဝ၊ ဓဇဂ္ဂသုတ်နှင့် ရိုမင်ကက်သလစ်
တို့ အစိုးရ မဆိုးဘူး
ကိုယ့် နိုင်ငံသား ပဓာနဝါဒ (သို့) နိုင်ငံတချို့ရဲ့ ...